Baseball Sunglasses And Sports Eyewear│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များ Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Baseball sunglasses are as important as any other protective bodywear inagame. Sports sunglasses are indispensable in daylight games. သူတို့ကိုမပါဘဲ, trying to catchaball, particularlyaball hit up high, can be difficult. The sun in your eyes can cause eyestrain and increase the chance that the ball will be missed. According to Prevent Blindness America, ထက်ပိုပြီး 40,000 peopleayear suffer sports-related eye injuries. Sports eyewear comes inavariety of shapes and sizes. Many baseball sunglasses come with lenses that are optimized to eliminate glare and enhance vision, particularly on sunny days. Many baseball players prefer wearing amber sunglasses, even though the lenses aren’t necessarily amber. မကြာခဏမထက်, they are eitheramirrored type with also known as REVO coating, brown or gray. Polarized lenses are alsoaplus as they decrease glare and eye strain. UV protection (ultraviolet ray protection) is alsoanecessity when selecting good eyewear. Another important feature of sports eyewear is their ability to shield players from serious injury. A thrown or batted baseball can travel at very fast speeds, and the injuries they can cause can be potentially serious. ဒီအတွက်ကြောင့်, it is recommended that baseball players choose sports sunglasses with polycarbonate lenses, which are able to withstand the impact ofabaseball and are virtually shatterproof. Some baseball sunglasses have designs that allow the lens can be changed to suit the lighting condition ofaparticular game. ဒါ့အပြင်, many versions incorporateawraparound profile that providesabetter field of vision. Others allow for different colored lenses to be swapped out. As protective gear, baseball sunglasses can enhanceaplayer’s performance and help prevent eye injuries caused by either sunlight or an errant ball. And last, but certainly not least, sports sunglasses areastylish and lightweight accessory on the field. Baseball Sunglasses And Sports Eyewear
Posted Articles Title : Baseball Sunglasses And Sports Eyewear
Posted by : အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များ Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
■Link To This Post (HTML code) : Baseball Sunglasses And Sports Eyewear
■Trackback URL : Baseball Sunglasses And Sports Eyewear
Golf has comealong way
Longer Drives ကိုနှိပ်ပါ – ဒီနေရာမှာဘယ်လိုပါပဲ
သေချာတာပေါ့2အမြတ်ပြန်လည်သုံးသပ် – ကောင်းလားဆိုးလား?
နေအိမ် - ထုတ်လုပ် Nightcrawlers
ဂေါက်သီးအကြောင်းသိကောင်းစရာများ ‘ နောက်ဆုံးပေါ် Gadget ကဘာလဲ?
Champ Bailey 1999 မူကြမ်းနေ့ရွေး
ဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်တိုးတက်လာသော LED မီးလုံးများ
Barry ဘွန်းနှင့် Steroid အသုံးပြုမှု
သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုထုတ်ဝေဘယ်တော့မှလိမ့်မည်。 * နှင့်အတူမှတ်သားကော်လံလိုအပ်သောပစ္စည်းများ
ဘောလ်ဘော — Retreat to Win
ကမ္ဘာ့အားကစားခေါင်းကြီးသတင်းသတင်းများကိုဖြန့်ဝေ, ကော်လံ, နှင့်ဆောင်းပါးများခေါင်းစဉ်များကမ္ဘာတဝှမ်းရှိလူတိုင်း. World Wide Web 「အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဆောင်းပါး WebSite.WS 」နိုင်ငံတကာအားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များဆောင်းပါးများသည်တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။. လူမှုရေးကွန်ရက်များမှလူတိုင်းကိုမျှဝေကြပါစို့.
အားကစားခေါင်းစဉ်များသတင်းဆောင်းပါးသည်သင့်အတွက်အသုံးဝင်သည်. ဤအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များနှင့်ဆောင်းပါးအားကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိလူများနှင့်အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များမျှဝေပါ. မင်းရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုလိုချင်ပါတယ်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
နွေရာသီတစ်လျှောက်တွင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုအရေအတွက်များပြားလာသည်. အချို့ကဤအရာသည်ရေထဲရှိလူများကိုတိုက်ခိုက်သောငါးမန်းများတိုးပွားလာသည်ဟုဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်လိမ့်မည်. ပုံဆောငျစကားပြော, လူ ဦး ရေတိုးပွားလာခြင်းကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုများတိုးများလာပြီးလူအများထိခိုက်နစ်နာစေနိုင်သည်. လက်တွေ့ကျကျ, ဆိုလိုတာကငါတို့ငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုသတင်းပို့စနစ်ကပိုပြီးထိရောက်လာတယ်. ရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးမန်းတစ်ကောင်ကသင့်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်အလမ်းကအတော်လေးသေးတယ်. ကမ်းခြေသို့ကားမောင်းနေစဉ်ရေထဲရှိငါးမန်းများထက်လူများကိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရစေပြီးသေဆုံးသည်. ငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုဒဏ်ရာများသည်ကမ်းခြေပေါ်ရှိထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုများထက်မများပါ, ထိုကဲ့သို့သောကျောရိုးပျက်စီးမှုအဖြစ်, jellyfish လက်နက်, ရေဓာတ်, နှင့်နေလောင်ခြင်း. လူအများစုတို့သည်ငါးမန်းကိုက်ခြင်းထက်သူတို့၏ခြေထောက်ပေါ်ရှိပင်လယ်ခွံများယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၏အကျိုးဆက်များအားဖြင့် sutures လိုအပ်သည်. မင်းကလျှပ်စီးလက်ခြင်းခံရတာပိုကောင်းတဲ့အခွင့်အလမ်းရှိတယ်, တစ် ဦး ပျားလက်နက်ကနေသေဆုံးသို့မဟုတ်တစ် ဦး ပြုတ်ကျအုန်းသီးအားဖြင့်ခေါင်းပေါ်ထိမှန်ခံရ, သင်တစ် ဦး ငါးမန်းများကတိုက်ခိုက်ခံရ၏လုပ်ပေးထက်. ငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုအများစုသည်ကမ်းခြေနှင့်နီးကပ်စွာဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည် 6-10 နက်ရှိုင်းသောပေ, သဲပေါ်တွင်သို့မဟုတ်သဲအကြား. ဤရွေ့ကားငါးမန်းများအစာကျွေးရန်လူသိများသည်နှင့်သူတို့ဒီရေနိမ့်ဖမ်းမိစေခြင်းငှါဒေသများဖြစ်ကြသည်. ဒီဒေသတွေမှာခုန်ပေါက်ပြီးကစားနေတဲ့ရေကူးသမားတွေဟာသားကောင်အဖြစ်မှားယွင်းနိုင်ပါတယ်. ထိုကဲ့သို့သောနေရာများတွင်သဘာဝစားနပ်ရိက္ခာအရင်းအမြစ်များစုဝေးနေသောကြောင့်ရေကျဆင်းခြင်းနှင့်နံရံများကဲ့သို့သောရေအောက်နေရာများမှာလည်းတိုက်ခိုက်ရန်နေရာများဖြစ်နိုင်သည်. တစ် ဦး ငါးမန်းတစ် ဦး ရေငုပ်သူတိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်အခါ, အဆိုပါငါးမန်းအများဆုံးဖွယ်ရှိအဆိုပါရေငုပ်သမားလုယူရာဥစ္စာအဖြစ်မှားယွင်းနေသို့မဟုတ်ရေငုပ်သူကမမျှော်လင့်ဘဲတုန်ခဲ့သည်. ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောရေတွင်ရေငုပ်သမားများပါ ၀ င်သောတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားနှစ်မျိုးရှိသည်; “လာပြီးကိုက်” တိုက်ခိုက်မှုများနှင့် “ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်” တိုက်ခိုက်မှုများ. ဤတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားများသည်မျက်နှာပြင်တိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်မတူပါ, ဒါပေမယ့်သာ။ ကြီးသောဒဏ်ရာများနှင့်အများဆုံးသေဆုံးမှုဖြစ်ပေါ်. “လာပြီးကိုက်” တိုက်ခိုက်မှုများသည်အစကန ဦး လှည့်ပတ်နေသောငါးမန်းများနှင့်အမှန်တကယ်တိုက်ခိုက်မှုမတိုင်မီသားကောင်ကိုမကြာခဏခုန်ခြင်းဖြစ်သည်. “Sneak” တိုက်ခိုက်မှုများကိုသတိမပြုဘဲသပိတ်မှောက်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာရှိသည်. ထပ်ခါတလဲလဲကိုက်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်အဆန်းမဟုတ်ဘဲများပြားလှသော (သို့) စဉ်ဆက်မပြတ်ကိုက်သောကိုက်များသည်ထိုတိုက်ခိုက်မှုအမျိုးအစားများအတွက်သာမန်အားဖြင့်ဤဒဏ်ရာများကိုအတော်လေးပြင်းထန်စေသည်, မကြာခဏသေခြင်းတရားအတွက်ရလဒ်. အဲဒီအစားမှားယွင်းတဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတစ်ခုကိစ္စဖြစ်ခြင်းထက်, ဤတိုက်ခိုက်မှုများသည်နို့တိုက်ကျွေးမှုသို့မဟုတ်ရန်လိုသောအပြုအမူများကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်. သင်ဟာရေငုပ်သူတစ်ယောက်ဆိုရင်, သင့်ငုပ်နေစဉ်အတွင်းငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီရန်အချက်အချို့ကိုဤနေရာတွင်ဖော်ပြထားသည်: ‘ အုပ်စုထဲမှာရေကူး. ငါးမန်းများသည်ရေငုပ်သူအမျိုးမျိုးကိုတိုက်ခိုက်ရန်အလားအလာနည်းပြီးတစ် ဦး တည်းသောရေငုပ်သမားကိုတိုက်ခိုက်ရန် ပို၍ ဖြစ်နိုင်သည်. သင်အနည်းဆုံးသင့်တယ်စိတ်ကိုထားပါ, အားလုံးငုပ်နေစဉ်အတွင်းသင်နှင့်အတူငုပ် buddy ရှိသည်. ‘ ညအချိန်တွင်ရေကိုရှောင်ပါ, အရုဏ် ဦး, သို့မဟုတ်မိုd်းမလင်းမှီ. ညအချိန်တွင်ငါးမန်းများသည်အမဲလိုက်ကြသည်. သငျသညျညဉ့်ရေငုပ်ကိုချစ်လျှင်, အုပ်စုနှင့်အတူငုပ်ခြင်းနှင့်သင်တစ် ဦး ငုပ်ဆီမီးခွက်ရှိသည်သေချာပါစေ. ‘ သင်သွေးထွက်လျှင်ရေထဲမသွားပါနှင့်. သငျသညျရေငုပ်နေစဉ်သွေးထွက်စတင်လျှင်, ဖြစ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးသွေးစီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ရန်ကြိုးစားပါ. ငါးမန်းများသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ထိခိုက်လွယ်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောစနစ်ရှိပြီးသွေးနှင့်အခြားကိုယ်ခန္ဓာအရည်များကိုအနံ့နှင့်အရသာပေးနိုင်ပြီးရနံ့ကို၎င်း၏အရင်းအမြစ်သို့ပြန်ရောက်စေနိုင်သည်. ရာသီသွေးသည်ငါးမန်းများကိုလည်းဆွဲဆောင်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ရာသီလာတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတိုးလာတာကိုမတွေ့ရဘူး. အမျိုးသမီးတော်တော်များများသည်ရာသီလာစဉ်နှင့်အန္တရာယ်ကင်းစွာရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရာသီသွေးမသွင်းခြင်းနှင့်ရာသီလာခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအမျိုးသမီးများပါ ၀ င်သောစစ်ဆေးမှုမတိုင်မီအထိအန္တရာယ်ကင်းစွာရေငုပ်။ ပျော်ဝင်နေကြသည်။. ‘ တောက်ပသောလက်ဝတ်ရတနာများကိုမဝတ်ပါနှင့်. တောက်ပသောလက်ဝတ်ရတနာများသည်ငါးမန်းတစ်ကောင်နှင့်တူသည်. ‘ သင်တစ် ဦး ရေငုပ်သင်္ဘောငုပ်နေစဉ်အတွင်းငါးမန်းကိုမြင်ရလျှင်, စိတ်အေးအေးထားပါ, တိတ်ဆိတ်နေ, ပြီးတော့သင်နေတဲ့နေရာမှာနေပါ. ငါးမန်းအများစုသည်စပ်စုရုံမျှသာဖြစ်ပြီးသူတို့ဘာသာသူတို့ထွက်ခွာသွားကြလိမ့်မည်. သင်တစ် ဦး ငါးမန်းကိုသင်အလွန်စိတ်ဝင်စားလာစတင်ပြီးပိုမိုနီးကပ်စွာရွေ့လျားလျှင်, ရေကိုစွန့်ခွာရန်အလုံခြုံဆုံးဖြစ်သည်. လျင်မြန်စွာနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့ရေကူး, တစ်ခုတည်းသောအချိန်ငါးမန်းစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်တစ် ဦး လက်မောင်းရဲ့လက်လှမ်းမမီအတွင်း၌သင်၏ငုပ်ရဲ့ buddy စောင့်ရှောက်ခြင်း. ငါးမန်းတိုက်ခိုက်မှု
ဖခင်များသည်ကလေးများအတွက်ကြီးမားသောဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်များကိုအမြဲဝယ်သည်; ဒါကြောင့်ကလေးဘဝ၏တကယ်တော့ပါပဲ. အဆိုပါလက်အိတ်အလွန်ကြီးစွာသောဖြစ်ကြပြီးဘယ်တော့မှဆင်းရဲသောသူသည်ကလေး၏လက်ပေါ်မှာ fit, ဒါပေမယ့်အဖေကသူတို့ကြီးထွားလာလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာပြောဆိုပါတယ်. နောက်ဆုံးတော့. သင်အရွယ်ရောက်ပြီးတာနဲ့, အဖေကသူ့ကိုယ်သူဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်နှစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုကယ်တင်ချင်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသင်သဘောပေါက်မိတယ်: သငျသညျခဲ့ကြသောအခါအဘို့အတ6နှင့်ဘေ့စ်ဘောအတွက်အောင်မြင်မှုမဆိုကြင်နာမရှိမျှော်လင့်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ်, သငျသညျခဲ့ကြသောအခါနှင့်အခြား 10 ဒါမှမဟုတ် 12 နှင့်ကျောင်းမှပြီးနောက်အသင်းအပေါ်ကစား. အဖေကစဉ်းစားနေတယ်. ကလေးများသည်သူတို့၏ပထမဆုံးဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်အရွယ်အစားကိုမုန်းတီးကြသည်, သူတို့တကယ်ကြီးထွားလာတယ်. အဘယ်အရာကို၏အသက်အရွယ်သည်အထိကြာရှည်ကြောင်းလက်အိတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏ 10 နေဆဲကောင်းသောပုံသဏ္inာန်အတွက်ဖြစ်မူရင်းရွေးချယ်မှုအပေါ်လုံးဝမှီခိုခဲ့သည်. ပလပ်စတစ်သို့မဟုတ်သားရေလက်အိတ်ဖြစ်ခဲ့သည်? ဒီဟာကဘာတောင်းမျိုးလဲ? ချုပ်အသံဖြစ်ခဲ့သည်? မိဘများ၏သဘောထားအကြီးအကျယ် Little ကလိဂ်အချိန်လာကလေးတစ် ဦး ရဲ့ဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်၏အခြေအနေအပေါ်သက်ရောက်သည် ‘ အကယ်၍ ကျောင်းအဖွဲ့များသည်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်လျှင်အရည်အသွေးကောင်းလက်အိတ်ကိုဝယ်ယူရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်. အမေနဲ့အဖေကသူတို့ကလေးတွေကိုပတ်ပတ်လည်မှာကစားစေချင်တယ်ဆိုရင်, ကသူတို့ရှေးခယျြပါလက်အိတ်ကြာရှည်ပါလိမ့်မယ်မဖြစ်နိုင်ပါပဲ. သင့်ကလေးအတွက်အနာဂတ်ကိုသင်ဘယ်တော့မျှမသိနိုင်ပါ, အရည်အသွေးကောင်းဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်သည်မကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်ပါ. မိဘအချို့သည်လူသိများသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်လက်အိတ်အမျိုးမျိုးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြသည်. ဒီမကြာခဏလက်အိတ်၏အရည်အသွေးရောင်ပြန်ဟပ်ပါဘူးနေစဉ်, ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည်ယေဘူယျလက်အိတ်များထက်ပိုမိုကုန်ကျမည်ဖြစ်သော၎င်းသည်တန်ဖိုးရှိနိုင်သည်. ပတ်ပတ်လည်မှာစျေးဝယ်! ပိုကြီးတဲ့လက်အိတ်ကိုဝယ်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့, မင်းရဲ့ယောက်ျားလေး (သို့) မိန်းကလေးတကယ်ကြီးထွားလာမယ်. ဒါကြောင့်တစ် ဦး ကိုမှန်ကန်ဂိမ်းသည်အထိကြာလျှင်, သင်သည်သင်၏အလုပ်ပြီးပြီ. Baseရာဘေ့စ်ဘောလက်အိတ်: သင်သည်ထိုသူတို့ထဲသို့ကြီးပွားသည်!
seasonပြီလသည် Flat ရာသီစတင်ရန်အပြင်းအထန်ကြိုးပမ်းနေသည့်လဖြစ်ပြီးmanyပြီလသည်အပြာရောင်ထိတွေ့သည့်စက္ကူကိုမီးထွန်းပေးသည့်လ်တာသည်အလယ်လတွင် Newmarket တွင် Craven အစည်းအဝေးဖြစ်သည်။. Newmarket ရဲ့ Rowley မိုင်သင်တန်း၏ breezy ပျော်မွေ့ခြင်းမပြုမီ, သို့သော်, intပြီလတွင်ကွဲအက်ကဒ်ပြားတစ်ခုဖြင့်စတင်သော Aintree ၌ Grand National အစည်းအဝေး၏အသေးအဖွဲကိစ္စလေးရှိသည် 6. In recent years Aintree’s prestigious three-day meeting has begun to rival Cheltenham’s somewhat bloated four-day fixture for thrills and spills, and there’s little doubt that the highlight of the Merseyside racing calendar offers three days of top-class racing culminating in the running of the world’s most famous race on the final day. As racecourses go, Cheltenham and Aintree are chalk and cheese: where the former is twisty and undulating withapunishing uphill finish, the latter is long and flat and essentially sharp in nature, and given the two contrasting course configurations it takesagood horse to winarace at the Cheltenham Festival and then do the same at Aintree. Exactlyayear ago at Aintree that’s exactly what Fota Island managed to do when adding the John Smith’s Red Rum Handicap Chase to the Grand Annual Chase that he had won in such superb fashion at Cheltenham just over two andahalf week’s previously. Not surprisingly there will be plenty of horses from this year’s Grand Annual that will be seeking compensation on Merseyside including Andreas, an early casualty in the Grand Annual whenawell backed favourite and Green Tango, who made strong late headway in the same race despite seeming unsuited to Cheltenham. Aintree’s flatter track should suit. In the Betfair Bowl Chase on the opening day, Cheltenham also-rans boastahealthy record and Gold Cup failures Monkerhostin and Beef Or Salmon could well be among those bidding to banish the blues ofapoor Festival run, while the versatile Impek,arunner-up in the Ryanair Chase at the Cheltenham Festival, may compete and is alreadyawinner over slightly shorter on this sharp course earlier in the season. In the big juvenile event, the John Smith’s Anniversary 4-Y-O Hurdle, several key players from Cheltenham’s Triumph Hurdle seem likely to figure including Fair Along, the Triumph Hurdle runner-up, who has already wonarace over course and distance, along with Afsoun, who was under the weather in the Triumph, and ratesastrong fancy. On the second day – April7– the big race is the John Smith’s Melling Chase, and since its inception in 1989 this race’s roll-call of winners has featured the top chasers in training, who have successfully stepped up in trip after excelling at their specialist distance of two miles. Remittance Man, Viking Flagship, Katabatic, Martha’s Son and Moscow Flyer are justahandful of past two-mile champions who have added this valuable prize after being crowned two-mile champions withavictory in the Queen Mother Champion Chase at the Cheltenham Festival. Newmill, this year’s shock Queen Mother hero, won’t be running at Aintree but Kauto Star and Dempsey may line-up for this prize. The former, who wasawarm favourite for the Queen Mother, fell early in that race bringing down the well supported Dempsey. If they have recovered from their tumbles, they should go close, while Irish raider and course winner Fota Island will bealikely contender too. The unique Grand National fences come into play for the John Smith’s and Spar Topham Chase on the second day, and sound-jumping and well-seasoned campaigners do well in this hurly-burly contest, while in the John Smith’s Mildmay Chase it pays to look forafresh horse that hasn’t endured the rigours of running in Cheltenham’s Royal & SunAlliance Chase,arace that tends to spoil their chances at Aintree. Grand National day features the big race itself that stands alone as the major betting race of the year. The 2006 contest is dominated by Clan Royal,arunner-up in 2004 and last year’s easy winner, Hedgehunter. Since the course was modernised in the early nineties and the fences made easier and the landing sides raised, the classy and better horses have come to fore and dominated the event. တကယ်ပါပဲ, the National now has the look of just another long-distance steeplechase but one with plenty of history attached. All eyes will be upon the fillies in the Shadwell Stud Nell Gwyn Stakes on the second day of Newmarket’s Craven meeting on April 19, but sadly in recent years this race has supplied few serious pointers towards the 1,000 Guineas, while further Classic clues may be on offer in the Craven Stakes for colts on April 20, the meeting’s final day. In 2004 the Barry Hills-trained Haafhd became the first colt since Tirol in 1990 to complete the Craven-2,000 Guineas double. The search for Classic pointers switches to Newbury on April 22 when the Lane End Greenham Stakes takes place over 7f. In recent seasons Turtle Island, Celtic Swing and Victory Note have all landed Classics after scoring here and backers should pay this race plenty of respect in the colts’ Classic reckoning. The Spring Cup Handicap at Newbury on April 22 is another race worthasecond glance. Horses that have run well in the William Hill Lincoln during the previous month have an excellent record here, and any that come from Redcar followingaprominent showing in the first big Flat handicap will surely warrant close consideration. At Ayr on the same day there’s the Scottish Grand National to whet the appetite. One thing’s for sure and that’s any horse which has run in the Aintree Grand National must be avoided as such runners have an appalling record in the Scottish equivalent. In 2004 Northern-trained Ryalux recordedapopular success and if the ground turns soft at the West of Scotland track plenty of folks will be rooting for another northern runner in Ossmoses,astrapping grey and stout stayer who all but landed the Midlands National overasimilar marathon trip at Uttoxeter last month. Twelve months ago trainer Paul Nicholls failed byawhisker to win this race with Cornish Rebel and the same trainer’s lightly-raced Ladalko has been kept fresh for this valuable prize. The Nicholls yard may also run Desert Quest, the County Hurdle winner, in the Scottish Champion Hurdle while Monet’s Garden,arunner-up in the Arkle Trophy Chase, bids to landathree-mile novices’ event at Ayr. The curtain comes down on April’s busy and varied month with the mixed jumps and Flat card at Sandown on April 29. The Betfred Gold Cup is the jump season’s final big handicap and fancied runners from the Paul Nicholls and Nicky Henderson stables should be noted. The latter almost landed this prize plusavaluable bonusayear ago with Juveigneur and he could well becomeaserious candidate again. Paul Nicholls should also be the trainer to watch in the Betfred Celebration Chase, with either Kauto Star or Andreas, two of the stable’s crack team of two-mile chasers, likely to land the honours. On the Flat the Betfred.com Mile Stakes is the highlight, and horses that ran well in Newmarket’s Earl of Sefton Stakes earlier in the month holdagood record in this Group Two contest. 18 Aprilပြီလရဲ့ဗြိတိန်မြင်းပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းအဘို့မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ရန်မြင်း
တစ် ဦး ကဂေါက်သီးဒဏ်ရာအားလုံးအပျော်တမ်းဂေါက်သီးနှင့်အတူအသုံးအများဆုံးပြissuesနာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သို့သော်ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များ၏လုံလောက်သောခွန်အားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိခြင်းနှင့်ထိရောက်သောလေ့ကျင့်ရေးနည်းစနစ်များတွင်ပါဝင်, ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းကိုလည်းကာကွယ်နိုင်သည်. အလွန်အမင်းအေးစက်သောခြေလက်များနှင့်အဆစ်များသည်လွှဲ၏ဖိစီးမှုများကိုကြုံတွေ့ရသောအခါဂေါက်သီးဒဏ်ရာရရှိမှုကိုများစွာလျှော့ချပေးလိမ့်မည်. သင်လွှဲကို execute သည့်အခါသင်၏ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှုထိန်းချုပ်မှုထဲကလျှင်, ကြွက်သားများနှင့်ရွတ်အမှားအဘို့အအနည်းငယ်သာနေရာရှိသည်. အဆိုပါရလဒ်ဖွယ်ရှိတဲ့မျက်ရည်သို့မဟုတ်တင်းမာရွတ်သို့မဟုတ်အသတ်မရှိသင်သင်တန်းကိုချွတ်သငျသညျ ligament'keeping ဖြစ်ပါတယ်. အဆိုပါဂေါက်သီးလွှဲရှုပ်ထွေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ် (ကျွမ်းကျင်မှု). သင်၏အကွာအဝေးနှင့်စွမ်းအင်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်, သငျသညျပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၏မြင့်မားသောအဆင့်ရှိရမည် (ရွေ့လျားမှု၏အကွာအဝေး) နှင့်ပါဝင်ပတ်သက်အဆစ်အတွက်အင်အားသုံး. ဤသည်ပခုံးများပါဝင်သည်လိမ့်မယ်, နောက်ကျောနှင့်တင်ပါး. ပြီးတော့ဂေါက်သီးရိုက်တဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါ, အထက်ဖော်ပြပါဒေသများစာရင်း၏ထိပ်ဆုံးမှာရှိပါတယ်. ပုံကိုသွား! သတိပြုရန်အချက်မှာပျမ်းမျှအားဖြင့်အင်အားနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်မှုနှင့်လွှဲနည်းစနစ်တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်, သင်တစ် ဦး ဂေါက်သီးဒဏ်ရာ၏ဖြစ်ပျက်မှုကိုလျှော့ချသာလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်လည်းသင်၏ဂိမ်း၏အရည်အသွေးမြှင့်တင်ရန်. အတော်များများကဂေါက်သီးကစားသမားများကသူတို့ဟာယေဘုယျအားဖြင့်ကျန်းမာပြီးဂေါက်သီးဒဏ်ရာမရှိဘဲဂေါက်သီးကစားနိုင်သည်ဟုထင်ကြသည်, ဂေါက်သီးကလပ်တစ်ခုတွင်ဂေါက်သီးသမားတစ် ဦး ဒဏ်ရာရသည့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကိုကျွန်ုပ်ကြားဖူးပြီးဖြစ်သည်. သင်သို့မဟုတ်ဂေါက်သီးကစားနေသူသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်? တစ်နေရာရာကနေငါကနေစာရင်းဇယားကိုဖတ်ပါ 10 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ. အဲဒီမှာကျော်ခဲ့သည် 39,000 ပြန်လာအတွက်အရေးပေါ်ခန်းထဲမှာဂေါက်သီးဒဏ်ရာ 1995! အလို! ဒါကမယုံနိုင်စရာပါပဲ! သတင်းပို့မခံခဲ့ရသောသို့မဟုတ်ဂေါက်သီးသမားအားဖြင့်ကုသခံခဲ့ရသောဒဏ်ရာများအားလုံးကော? သို့မဟုတ်ဂေါက်သီးကစားသမားသည်သူနှင့်အတူနေထိုင်သောနာတာရှည်ဂေါက်သီးရိုက်ခတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကော’ ဂေါက်သီးကစားနိုင်ဖို့ပဲ? ဒီကနေဂဏန်းတွေပါ 10 လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာ! အခုသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေပြီလဲလို့ကျွန်တော်တွေးမိသည်? ဂေါက်သီးအားကစားနှင့်သင့်တော်သောလေ့ကျင့်မှုမပါဘဲသင်ပြောရန်ဒီမှာဖြစ်သည်, သငျသညျအထကျဖျောပွထားသောအရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်. ငါကဂေါက်သီးအစွမ်းသတ္တိနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်သငျသညျဂေါက်သီးဒဏ်ရာကိုရှောင်ရှားရန်ကူညီပေးပါမည်ဟုပြောရန်ခဲယဉ်းရောင်းရဲ့မထင်ပါဘူး. ဂေါက်သီးဒဏ်ရာကာကွယ်ခြင်း
ရေငုပ်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၏ ရေပန်းအစားဆုံး အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုသည် Reactor Watches မှ ထုတ်လုပ်ပေးသည့် နာရီအမျိုးအစားများဖြစ်သည်။. လေးနက်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ရေငုပ်သမားများအတွက် မရှိမဖြစ်ဟု သတ်မှတ်သည်။, Reactor အားကစားနာရီများကို stainless steel အိတ်များနှင့် လက်ပတ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။, စမ်းသပ်ပြီးသည်နှင့် ရေတွင်း သို့မဟုတ် အပြင်တွင် တာရှည်ခံကြောင်း သက်သေပြထားသည်။, ရေအောက် အနက် မီတာ နှစ်ရာအထိ. လက်ပတ်နာရီသည် ခြစ်ရာများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ရေစိုခံသည်။. တောက်ပသော display ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။, ရေငုပ်ခရီးစဉ်များအတွင်း သမုဒ္ဒရာ၏ နက်နဲမှုအောက်တွင်ပင် အချိန်ကို ပြောပြခြင်းသည် လွယ်ကူစေသည်။. Reactor နာရီများသည် တက်ကြွသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများအတွက် မတူညီသော စတိုင်များနှင့် ဒီဇိုင်းများဖြင့် လာပါသည်။. ၎င်းသည် ကျက်သရေရှိပြီး လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းအားလုံးကို တစ်ခုတည်းတွင် ပါရှိသည်။, သွားနေတဲ့သူတွေအတွက် အဆင်ပြေစေမှာပါ။. ဤသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် Reactor နာရီများသည် ရေငုပ်သမားများကြားတွင် သစ္စာရှိစျေးကွက်ကို တွေ့ရှိရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။. ထို့အတွက်ကြောင့် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ ကတိအတိုင်း 'ပျက်သွားပါက၊, ငါတို့, ပြင်ပါ။, ကာလ။’ စုဆောင်းမှုအမျိုးမျိုးတွင်ရနိုင်သည်။, Reactor အားကစားနာရီများသည် တက်ကြွလန်းဆန်းပြီး ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် အပန်းဖြေမှုများတွင်ပါ၀င်သည့် တက်ကြွလန်းဆန်းသော ချစ်သူများအတွက် လက်ဆောင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. Reactor အားကစားနာရီများသည် သုံးစွဲသူများအား ၎င်း၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် နည်းပညာအတွက် အာမခံချက်ပေးပါသည်။. ၎င်း၏တန်ဖိုးကြီးသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပင်, နာရီများကို ပညာရှိဝယ်ယူမှုတစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်သည်။. ဓာတ်ပေါင်းဖိုစောင့်ကြည့်
ဂေါက်ကလပ်များသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဂေါက်သီးကိရိယာများဖြစ်သည်. သင် ဦး ထုပ်နှင့်ဂေါက်သီးလှည်းမရှိဘဲလုပ်နိုင်သည် ‘ သင်ကစားသည့်သင်တန်းသည်အလွန်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်ဆိုပါကဂေါက်သီးဖိနပ်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ဂေါက်သီးရိုက်ဖို့အတွက်သင်ကလပ်အချို့နှင့်ဘောလုံးတွေလိုအပ်လိမ့်မယ်. ဂေါက်သီးကလပ်ကောင်းများသည်သင်၏ကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်စေနိုင်သည်. ဂေါက်သီးကလပ်များကိုသီးခြားနယ်မြေနှစ်ခုအဖြစ်ခွဲထားသည် ‘ ယာဉ်မောင်းနှင့်သံ. ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများ – ယေဘုယျအားဖြင့်ယာဉ်မောင်း, the first golf club thatagolfer uses to drive the ball off of the tee isadriver. With the driver the golfer attempts to drive or hit the ball down the fairway at the greatest distance possible. သို့သော်, it is important to make sure that with the initial drive you do not sacrifice accuracy for distance. It is important to select the right drivers ‘ most people can useastandard length club, but if you are very short, or very tall, you may needaone specially made for your height. You can also get drivers which have been altered to helpagolfer with their swing by shifting the weight of the drivers head to compensate for any bad habits. You can get drivers which have been made from wood or metals such as titanium. ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများ – Irons The golf clubs that are known as the irons are those golf clubs that are used after the initial drive off of the tee. As with the driver the shaft of the iron must be in proportion to the golfer’s height. There are typically 8 clubs inaset of irons ‘ they are usually made from graphite or steel. Irons are different from other golf clubs in that they have angled heads. As you go through the range of irons the heads are graduated in angle by around ‘ and inch. Some of the irons are forged, and others are casted ‘ which kind you prefer will probably be down to personal preference. ဂေါက်သီးကလပ်အသင်းများ: ဂေါက်သီးသုံးပစ္စည်းများ၏အရေးအပါဆုံးအပိုင်းအစ
ဘာကြောင့် Seahawks Super Bowl ကိုသွားမှာလဲ
မင်းစဉ်းစားနေတာကိုငါသိတယ်. ဘယ်လိုချီကာဂိုဝက်ဝံကော? သူတို့ကိုမေ့လျော့. ချီကာဂိုဝက်ဝံများပြုသည်. သူတို့ကအလွန်အမင်း overrated ဖြစ်ကြသည်. သူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အစက်အပြောက်ဟာ QB ဖြစ်ပြီးသူတို့ PLAYOFF အချိန်လာသူတို့ကိုသတ်ပစ်ရမယ့်ပါတယ်. ဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးပါ, လျစ်လျူရှုခံထားရသည့်ကာကွယ်ရေးနှင့်ပြစ်မှုကျူးလွန်သောမည်သည့်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောအသင်းဖြစ်ပါသနည်း? မင်း Seahawks ဒါမှမဟုတ် Giants ကိုပြောရင်, မင်းမှားလိမ့်မယ်. နှစ် ဦး စလုံးအသင်းများကိုရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်. ရဲ့ Seahawks အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့. ပထမ, သူတို့ကစားရန်စစ်သား Field သို့သွားကြ၏. ဒါကခက်ခဲတဲ့နေရာပါပဲ. ဒါပေမယ့်, ဒီမှာအရာပါပဲ. Seahawks တွင် MVP Shaun Alexander မရှိသဖြင့် WR Branch ကိုရခဲ့သည်. အဘယ်ကြောင့်ဘဏ်ခွဲအရေးကြီးပါတယ်? ကောင်းပြီ, Seahawks သည်ပထမဆုံးအကြိမ် ၄ ကြိမ်တိုင်တိုင်ကျူးလွန်ခဲ့သည်. သူတို့ဟာချီကာဂိုဝက်ဝံဂိမ်းကို သုံး၍ သူတို့၏အသစ်သောထိုးစစ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုပြေးပွဲတစ်ပွဲမပါဘဲစမ်းသပ်ခဲ့သည်. သူတို့ကဖြတ်သွား, လွန်နှင့်အချို့သောပိုပြီးလွန်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, သငျသညျပြတင်းပေါက်ထဲကဂိမ်းဆမ်းနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အခြားပွဲစဉ်တက်၏ခန့်မှန်းချက်တိုင်းတာခြင်းမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့. အဆိုပါဝက်ဝံမကြာသေးမီက Giants ကစားခဲ့သည်, ဒါပေမယ့် Giants တက်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည်. အဆိုပါဝက်ဝံလည်းအချိန်ဇယားဆွဲချိုး၏အားသာချက်ယူရတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဂျက်လေယာဉ်ဂိမ်းထဲကနေရောက်လာကြတယ်. ဝံမတုန်လှုပ်နေသောသူတို့သည်ပြီးခဲ့သည့်ရာသီကဲ့သို့ဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်. ဒီတော့ဘာကြောင့် Seahawks? ဝံဖြစ်နိုင်ပါတယ် #1 အမျိုးအနွယ်နှင့် Seahawks the #2. ဒါဟာ Giants ကဲ့သို့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချီကာဂိုသို့သွားနှင့်ဝံရိုက်နှက်လိမ့်မည်ဟုဖွယ်ရှိပါတယ်. ဝက်ဝံများရှုံးပါက Seahawks တွင်အနည်းဆုံးဂိမ်းတစ်ခုနှင့်ချန်ပီယံဂိမ်းအတွက်အိမ်လယ်မြေရှိလိမ့်မည်. ၎င်းတို့သည်အိမ်တွင်အလွန်ခက်ခဲပြီး NFC တွင်မည်သည့်အသင်းကိုမဆိုအိမ်၌ဖြစ်စေ၊. ဒီနှစ်တက်သောအခါ, ကျနော်တို့ Seahawks ပြန် Super Bowl မှချီတက်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်. သူတို့ဒီအချိန်အနိုင်ရကြမလား? အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်. ဘာကြောင့် Seahawks Super Bowl ကိုသွားမှာလဲ
ကျွန်ုပ်၏ Fondest Camping Memories
ငါငယ်စဉ်ကကွဲပြားခြားနားသောစခန်းချခရီးစဉ်၏အလွန်မြတ်နိုးအမှတ်တရများရှိသည်. ဒီခရီးစဉ်တွေကကျွန်တော့်မိသားစုကိုနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့အတူတကွစုစည်းပေးခဲ့ပြီးအချိန်ကောင်းလည်းအမြဲရှိခဲ့တယ်. ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော၌စခန်းချခြင်းဖြစ်သည်. ငါအမဲလိုက်ရန်နှင့်ငါးမျှားရန်ကြိုက်တယ်, နှင့်စခန်းချတစ်ခုခုကိုလုပ်ဖို့သင်အလွန်ကြီးစွာသောအနေအထား၌ထည့်လေ့မရှိ. တခါတရံငါသဘာဝ၌ထိုင်ခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏သဘာဝကျက်စားရာနေရာတွင်တိရိစ္ဆာန်များကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ကြိုက်တယ်. နေ့စဉ်အသက်တာ၏ပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့်ပဟေleိဆန်ခြင်းကသင်၏စွမ်းအင်အားလုံးကိုဖြုန်းတီးနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တောအုပ်တစ် ဦး နေထိုင်ခြင်းသည်သင်၏ဝိညာဉ်ကိုနုပျိုစေနိုင်သည်. တောအုပ်ထဲမှာစခန်းချခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာအရာအားလုံးမည်မျှတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်။ အေးဆေးငြိမ်သက်နေသည်. ကျွန်ုပ်အစဉ်အဆက်ခရီးသွားသောအကောင်းဆုံးခရီးသည်ကျွန်ုပ်အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်၌အမေနှင့်အတူနူးလှေခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. Buffalo မြစ်ကိုဆင်းပြီးကနူးလှေစီးဖို့ Arkansas ကိုကျွန်တော်တို့ကားစီးခဲ့ကြတယ်. စခန်းချခရီးစဉ်သည်တစ်ပတ်ခန့်ကြာမြင့်မည်ဖြစ်သည်, ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ပါတယ်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့ကညအချိန်မှာတဲတစ်လုံးတည်းမှာနေရလိမ့်မယ်. ကျွန်မတို့ခရီးကိုစခဲ့ပြီးငါဟာရေကြောင်းသမားလို့သတ်မှတ်ခံရတယ်, ဒါနဲ့မြေပုံကိုဖတ်နိုင်ခဲ့တယ်, ငါအရမ်းအေးတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်. အချိန်အများစုမှာမြစ်အလွန်ယဉ်ပါးခဲ့သည်, ပြီးတော့ငါတို့မြစ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆင်းလိုက်တယ်. ဒီအချိန်အတောအတွင်းငါငါးမျှားနိုင်ခဲ့သည်, နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ပျင်းရိဖြစ်လိမ့်မည်. ခရီးစဉ်အတွင်းမှာပုံမှန်အားဖြင့်အသက် ၂၀ လောက်ဖမ်းမိတယ်, ဒါပေမယ့်ငါစိတ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်, ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကနူးပတ်ပတ်လည်မှာသက်တံ့ရောက်ရေချိုငါးကိုတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်လူအတော်များများကိုကိုက်လို့မရဘူး. စခန်းခရီးစဉ်တစ်လျှောက်လုံးတွင်ကျွန်ုပ်သည်ရေချိုငါးချောင်းသာဖမ်းမိခဲ့သည်. သို့သော်ဤရောက်ရေချိုငါးများကိုငါဖမ်းမိသောအခါအလွန်ပျော်စရာဖြစ်ခဲ့သည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါသူတို့ကိုလှည့်လည်နေတုန်းသူတို့ကနူးကိုနည်းနည်းပတ်ပြီးဆွဲခိုင်းလိမ့်မယ်. မြစ်၏အချို့အပိုင်းများ၌အနည်းငယ်သော Rapids အနည်းငယ်ရှိသည်, ငါတို့တစ်ချိန်ကရေတံခွန်သေးသေးလေးကိုတောင်ကျော်သွားခဲ့တယ်. ဒီစခန်းချခရီးစဉ်ကအရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပြီးကျန်တဲ့တစ်ခြားဘဝတွေကိုလည်းမှတ်မိနေမှာပါ. ကျွန်ုပ်၏ Fondest Camping Memories
လူတစ် ဦး သည်မြစ်၌ဖြစ်စေ၊ ပင်လယ်၌ဖြစ်စေငါးမျှားရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေစိန်ခေါ်မှုများအမြဲတမ်းရှိလိမ့်မည်. သတိရရမယ့်အရေးကြီးတဲ့အချက်ကတော့ငါးကိုစောင့်ရင်းသည်းခံခြင်းနှင့်ပေါ်လာတဲ့အခါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခြင်းဖြစ်တယ်. ငါးဖမ်းနိုင်ခြင်း, လူတစ် ဦး သည်ငါးဖမ်းခွင့်လိုင်စင်ရရန်လိုအပ်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာယင်းသည်ဥပဒေအရလိုအပ်သောကြောင့်ငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောစည်းမျဉ်းများသည်ပြည်နယ်တစ်ခုမှတစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသည်. ငါးဖမ်းခြင်းအတွက်မှန်ကန်သောပစ္စည်းကိရိယာများကိုရယူခြင်းသည်၎င်းကိုအမှတ်ရစရာဖြစ်စေရန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်. မှားယွင်းသောငါးဖမ်းပိုက်အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်အရည်အသွေးညံ့သောကြောင့်အသုံးပြုခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်ငါးဆုံးရှုံးခြင်းကဲ့သို့သောပြproblemsနာများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်. ရှိပါတယ်4စျေးကွက်အတွက်ရရှိနိုင်အမျိုးအစားများ. ဤရွေ့ကား monofilament ဖြစ်ကြသည်, ကျောက်စိမ်း, ဖျူးနှင့် fluororcarbon. Monofilament ငါးဖမ်းခြင်းသည်ငါးဖမ်းခြင်းတွင်လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာလှည့်ပတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. ငါးဖမ်းသည့်အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင်လည်းကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သည်. ဒီလိုင်းနှင့်အတူပြproblemနာက ‘မှတ်ဉာဏ်ရှိပါတယ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။’ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်အချိန်အတန်ကြာသိမ်းဆည်းထားပါကပုံသဏ္certainာန်ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်. လူတစ်ယောက်ဟာမကြာခဏငါးမျှားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်, ရှည်လျားလွန်းသည့်လိုင်းကို ၀ ယ်ရန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး၊ ငါးဖမ်းထွက်သည့်အခါတိုင်း၎င်းကိုပြောင်းလဲရန်အကြံပြုသည်. ကျိုးငါးဖမ်းလိုင်းများမှာအင်အားအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်4ရရှိနိုင်. ဤရွေ့ကားလိုင်းများဆန့်ကြဘူးနှင့်မျဉ်း၏ယက်သဘာဝက float စေသည်ကတည်းကကြည့်ဖို့အတော်လေးလွယ်ကူပါတယ်. ဒီလိုင်းရဲ့မကောင်းတဲ့အပိုင်းကသူရဲ့လက်တွေလိုအခြားအရာတွေကိုလည်းပွန်းပဲ့စေတဲ့အားသာချက်ပါ, ငါးဖမ်းလှံတံနှင့် reel လမ်းပြသောလိုင်း. ဒီအတိုင်းတော့, အဲဒါကိုအသုံးပြုတဲ့အခါတစ်ခုမှာမှန်ကန်သောဟာ့ဒ်ဝဲရှိသင့်သည်. လက်ျာလိုင်းနှင့်အတူငါးဖမ်း
The Game of Cornhole has the attention of Cincinnati Bengals quarterback Carson Palmer and Lighthouse Youth Services of Cincinnati is cheering Who-Dey. On Saturday September 1, 2007 the Cincinnati Bengals practice field was dotted with American Cornhole Tournament Series Cornhole Boards for the Second Annual Carson Palmer Cornhole Classic. The Cornhole Classic isafun-filled charity outing much different fromacharity golf outing. The entire playing area is confined to the Cincinnati Bengals practice field allowing guests and participants to have much more one on one contact than atagolf outing. Whether signing autographs, talking football, or pitching cornhole bags, the atmosphere is relaxed and engaging. The game of cornhole is simple. Pitchabag of corn towarda6″ hole cutout ona2′ x 4′ elevated board. In this event all boards are American Cornhole Boards. These are the best cornhole boards available. The boards are made of hardwood with all rounded edges, and the AC Cornhole Bags are the Official Tournament Series SoftTouch Bags, so excuses are limited to the individual not to the equipment. The participants at this event vary in size and demeanor. Each having their own special cornhole bag delivery and style, hoping to be good enough to win the round they are playing in so as to avoid elimination and go on to the next round. Proceeds from the Carson Palmer Cornhole Classic go to Cincinnati based Lighthouse Youth Services. Carson isastrong supporter of the Emancipated Youth Program of Lighthouse Youth Services that provides supervised apartment living and aftercare services for youth 18 and over who have been discharged from HCJFS custody. It’s true the Carson Palmer pass game is setting records for the Cincinnati Bengals, however it is his cornhole pitch that is makingadifference in lives at Lighthouse Youth Services. Carson Palmer Pitches A Great Cause On American Cornhole Boards
Poker သည်အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ, သို့သော်ကစားချိန်၌ကျွမ်းကျင်မှုများစွာရှိနေသေးသည်. ဖဲချပ်အသစ်ကစားသမားအသစ်များသည်လောင်းကစားအမှားများပြုလုပ်မိခြင်းကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကျများပြီးပြိုင်ပွဲများမှလွတ်မြောက်စေသည်. အတွေ့အကြုံရှိသူအချို့သည်အွန်လိုင်းပေါ်တွင်အခမဲ့ဖဲချပ်ဝေကစားကြသည်. သို့သော်, ကစားသမားအသစ်များပြုလုပ်သောလောင်းကစားအမှားလေးခုကိုသိခြင်းအားဖြင့်, သင်အနိုင်ရတဲ့ဂိမ်းနှင့်ပြိုင်ပွဲများ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုအများကြီးတိုးနိုင်ပါတယ်. 1. All-in ကိုမကြာခဏသွားခြင်း (သို့) သိသာထင်ရှားသည့်စိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်ခြင်း. ကစားပိုက်ဆံနှင့်အတူများစွာသောပြိုင်ပွဲများတွင်, အချို့ကစားသမားများအားလုံး - အတွက်ပထမ ဦး ဆုံးလက်သွား. ဒါဟာအကြိမ်အနည်းငယ်အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ခဏအကြာတွင်, တစ်ယောက်ယောက်ကမင်းကိုခေါ်မယ်. အဲဒီကိစ္စမှာ, မင်းမှာကတ်ကောင်းကောင်းရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်. All-in ကိုကစားသမားများအားခေါက်ရန်အသုံးပြုနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်တကယ်တမ်းကျတော့ခင်ဗျားမှာခိုင်မာသောလက်ရှိတယ်၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့ stack ကိုနှစ်ဆတိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်တကယ်ပဲသုံးသင့်တယ်. လူများသည် All-in တစ်ခုနှင့်အလွန်အမင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းကိုပြုလုပ်သင့်သည်. All-in အားမကောင်းသောလက်ဖြင့်လုပ်ခြင်းသည်လူအများက 'မကောင်းသော Poker' ဟုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။’ တစ်ခါတလေမင်းကံကောင်းနိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်အကောင်းဆုံးကစားသမားဂရုတစိုက်အလောင်းအစား. 2. လောင်းကစားခြင်းအောက်တွင်. သငျသညျအကောင်းတစ် ဦး စတင်လက်ရှိပါက, Pre-flop ကိုမြှင့်ဖို့မကြောက်ပါနဲ့, သို့မဟုတ်လာသောသေတ္တာအမြင့်တွင်လောင်းပါ. သင်တစ် ဦး သည်ကြီးစွာသောလက်ရှိပါက, ထို့နောက်နှေးကွေးစွာကစားခြင်းသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်. သို့သော်, သင်လောင်းကစားစတင်သောအခါကန့်သတ်ချက်မရှိသည့်ဂိမ်းတွင်ကစားနိုင်သည်, သူတို့သည်သေးငယ်လွန်းသင့်သည်. အကြောင်းပြချက်တစ်ခုကသေးငယ်တဲ့လောင်းကြေးများများစားစားရှိလျှင်သင်ပိုက်ဆံများများရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး. နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုကသင်သည်အခြားကစားသမားအများအပြားလက်ထဲတွင်ရှိနေရန်မက်လုံးပေးနေခြင်းဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်, သင်ကအခြားကစားသမားကိုသင့်ထက်ပိုကောင်းတဲ့လက်ကိုနှိပ်ဖို့အခွင့်အရေးတွေပေးနေတယ်. အကောင်းဆုံးကစားသမားများကကစားသမားတစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး သာခေါ်သည့်နေရာကိုရရန်အတွက်မှန်ကန်သောပမာဏကိုသာလောင်းသည်. အဲဒီကိစ္စမှာ, အနိုင်ရဘို့သင့်အလေးသာအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြသည်. 3. လောင်းကစားကျော်. ကစားသမားအချို့သည်ကောင်းမွန်သောလက်ရှိလျှင်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားကြသည်. သူတို့က All-in သွားလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်အလောင်းအစားများကိုလောင်းပါ. ၎င်းသည်လက်တစ်ကမ်းမှစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတစ်ခုမျှသာမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းလူတွေကသင့်ကိုစတင်ဖတ်နိုင်ပြီ. သင်တစ်ခုခုရှိသည့်အခါမှသာသင်အလောင်းအစားလုပ်သည်ဆိုပါက, လူတွေကအမြဲတမ်းခေါက်ပြီးမင်းပိုက်ဆံမရကြဘူး. သို့သော်, သင်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်, သငျသညျကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လောင်းကစားမချသောကြောင့်လူတို့လည်းသိကြလိမ့်မည်. 4. နောက်ဆုံးတော့, ဘယ်အချိန်မှာဘယ်ခေါက်မယ်ဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်. အကောင်းဆုံးဖဲချပ်ကစားသမားများသည်အခြားကစားသမားများကိုအဆက်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေကြသည်, ပြီးတော့ဘယ်သူ့မှာရှိတာထက်ပိုကောင်းတဲ့လက်တွေရနိုင်မှာလဲ. တစ်စုံတစ် ဦး ကမြင့်မားတဲ့လောင်းကစားလျှင်, ပြီးတော့မင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့လက်ရှိတယ်ဆိုတာမင်းသိတယ် (အရာမရှိသလောက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်), ထို့နောက်သင်ခေါ်နိုင်သည်. သို့သော်, ပိုကောင်းသောလက်ရှိသည့်အခြားသူတစ် ဦး ၏အလေးသာမှုကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်. ထို့အပြင်, ဖဲချပ်ကစားသမားအသစ်များသည်သူတို့မှာဘာမှမရှိသည့်အခါကြီးမားသောအလောင်းအစားများကိုခေါ်ကြသည်, သူတို့ကသာမဲနှိုက်ကဒ်လိုအပ်ပါတယ်. ဒါကအဆိုးဆုံးအမျိုးအစားပဲ. လူတစ် ဦး သည်၎င်းတို့အတွက်လိုအပ်သောနောက်ဆုံးကဒ်ပြားကို (သို့) သုံးမျိုးအတွက်မကြာခဏရရှိလိမ့်မည်. အလေးသာမှုများကိုသိရှိခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောဖဲချပ်ကစားခြင်း၏သော့ချက်ဖြစ်သည်. ဖဲချပ်ကစားသမားအသစ်များသည်အတွေ့အကြုံရှိကစားသမားများအတွက်လွယ်ကူသောပစ်မှတ်များဖြစ်သည်. ဖဲချပ်ကစားသမားအသစ်အတော်များများသည်လောင်းကစားအမှားများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားသည်. သူတို့အားအမှားများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်, က Poker အတွက်အလေးသာလေ့လာဖို့ကအရေးကြီးတယ်, အခြားကစားသမားများနိုင်သည့်အရာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, နှင့်အသိဉာဏ်အလောင်းအစား. သင်အဲဒီလိုလုပ်ရင်, ထို့နောက်သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိသည့်ဖဲချပ်ဝေကစားနည်းကိုအောင်မြင်လိမ့်မည်.4လောင်းကစားခြင်းအားကစားအသစ်အမှားများကစားသမားများလုပ်သည်
A golf training book needs to be ‘user-friendly’ and ‘plug-and-play’. What I mean by that isagolfer should be able to haveaclear idea on what he should do immediately to improve his/her game. And it should be easy to apply. No figuring out what to do next. No sense of confusion or frustration at information overload. Haven’t you purchasedabook (not necessarilyagolf training book) before; got excited to dive and; and then inashort period of time felt overwhelmed? I know I have! It’s notagood feeling and can leave you even more frustrated than before you purchased it. I have even seen golf training books that have been thrown together by several ‘so-called’ experts and by the time you’re finished you don’t know where to begin. That’s not to say the information wasn’t credible, but isn’t the whole purpose of readingabook having the ability and confidence to know what to do next to achieve whatever goal you had when you first purchased it? သို့သော်ငြားလည်း,agolf training book that will work for you should have all the components of the golf swing including swing mechanics, biomechanics, ခွန်အား, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်, aerobic, injury and much more. And not only the above information, but inaway that you’the reader can apply immediately. It would be nice to have step-by-step instructions, illustrations, and even the benefit to the golf swing throughout the entire golf training book. I have bought and read over two dozen golf training books in pure disgust. They are not ‘golf-specific’ but just general training books that don’t have any application to the golfer. This golf training book should also break down every phase of the golf swing and have strength and stretching exercises for each phase. That way you can really dial in to the exact issues you are having with your swing. This way the golf training book isn’t onlya‘plug-and-play’ book but an ongoing resource for you to refer to for many years. Having sucharesource is invaluable in your pursuit ofabetter game. I could write about golf training books for 50 pages, but I don’t want to bore you too much. Just make sure before you buyagolf training book, you skim it to see if you can easily understand and apply the information. What Makes A Golf Training Book Effective
Tandem Skydiving ၏ခံစားချက်
Tandem skydiving သည် ဤရေပန်းစားသော အစွန်းရောက်အားကစားကို တွေ့ကြုံခံစားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။. လူတွေ, သော်လည်း, မိုးပျံခုန်ချခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကြောက်ရွံ့မှုများစွာရှိသည်။. ဒဏ္ဍာရီတစ်ခုကတော့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ပြုတ်ကျနေချိန်မှာ အသက်မရှူနိုင်ဘူးဆိုတာပါပဲ။. ဒါအမှန်မဟုတ်ဘူးဗျ။, မဟုတ်ရင် ခုန်ချသူတွေက မြေပြင်ရောက်ရင် သတိရှိမှာမဟုတ်ဘူး။. နောက်ထပ်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုကတော့ သင့်ရေတံခွန်က မပွင့်ပါဘူး။. အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ကျောင်းသူငှာငှာများသည် အခြားရေချွဲများထက် ပိုမိုလုံခြုံသောကြောင့်ဖြစ်သည်။, ဒါက လက်တွေ့ကျတဲ့ စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။. ထို့အပြင်, ယခုအခါ chutes အများစုသည် အလိုအလျောက် အဖွင့်ကိရိယာများဖြင့် တပ်ဆင်ထားသည်။, ဒါကြောင့် သင့်ရေတံခွန်ကို အချိန်မီမဖွင့်တာတော့ စိုးရိမ်စရာမဟုတ်ပါဘူး။. အာမခံချက်ရှိသော်လည်း၊, သော်လည်း, မိုးပျံခုန်ချခြင်း၏ ဘေးကင်းရေးကို လူအများက စိုးရိမ်နေကြဆဲဖြစ်သည်။. အဲဒီ့အတွက်, tandem skydiving သည် လူတို့၏စိတ်ကို ပလိပ်ရောဂါဖြစ်စေသည့် ငြီးတွားသံသယများကို စိတ်ပူစရာမလိုဘဲ အားကစားကို တွေ့ကြုံခံစားရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. Tandem သည် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် skydivers များအတွက် ခုန်ချခြင်း၏ ရေပန်းအစားဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. ကျောင်းသားများကို မိနစ်သုံးဆယ်ခန့် သင်ကြားပို့ချပေးသည်။. ထိုမိနစ်သုံးဆယ်အတွင်း, သူတို့နဲ့အတူ ခုန်ပေါက်မယ့် သင်တန်းဆရာတွေနဲ့ တွေ့တယ်။. ခုန်ချခြင်းဆိုင်ရာ သင်ကြားပြသမှု ဗီဒီယိုများကိုလည်း ကြည့်ရှုကြသည်။, လုံခြုံရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ကျော်သွားပါ။, ပြီးတော့ သူတို့သုံးမယ့် ပစ္စည်းတွေကို တပ်ဆင်ပါ။. ထို့အပြင်, ကျောင်းသားများသည် လေယာဉ်မှ မည်သို့ထွက်ခွာရမည်ကို လေ့လာကြသည်။, ဘယ်လိုလွတ်မလဲ။, ဆင်းသက်စက်ဝန်းအတွင်း ခန္ဓာကိုယ်အနေအထားအရ ဘာလုပ်ရမလဲ. သင်တန်းဆင်းပြီးနောက် သင်္ဘောပေါ်မှကြိုဆိုပါတယ်။, ခုနက ကျောင်းသားတွေနဲ့ သင်တန်းဆရာတွေက ဆင်းဇုန်ကို ဆယ့်ငါးမိနစ်ကနေ မိနစ်နှစ်ဆယ်အထိ လေယာဉ်ပေါ်တက်၊. ထွက်ရမယ့်နေရာကို ချဉ်းကပ်ဖို့ စောင့်နေတုန်း, သင်တန်းဆရာများသည် ကျောင်းသားများနှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြောင်း နောက်ဆုံးသုံးသပ်ချက် ပြုလုပ်ကြသည်။. အချိန်ကျလာတဲ့အခါ, သင်တန်းဆရာတွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေက လေယာဉ်ကို ပေတစ်သောင်းလေးထောင်လောက်မှာ ထားခဲ့တာ။. Free fall သည် မိနစ်အနည်းငယ်သာကြာသည်။. နောက်ဆုံးတော့ ရေတံခွန်ပွင့်သွားတယ်။, မြေကြီးပေါ်သို့ ဖြည်းညှင်းစွာ ပြန်ဆင်းလာခြင်းသည် ငါးမိနစ်မှ ဆယ်မိနစ်အထိ ကြာရှည်သည်။. ရံဖန်ရံခါ, သင်တန်းဆရာများသည် ကျောင်းသားများအား ဆင်းသက်ရာဇုန်သို့ ချုံးချုံးကို ကူညီပေးနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။. ဤအရာက ကျောင်းသားများကို ချောင်း၏ခံစားချက်ကို ရရှိစေရန် ကူညီပေးသည်။. ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ မိုးပျံဒိုင်ဗင်သင်တန်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်လိုသော ကျောင်းသားများအား အသိအမှတ်ပြုထားသော ရေငုပ်သမားဖြစ်လာစေရန်လည်း ကူညီပေးပါသည်။. Skydiving သည် အလွန်အန္တရာယ်များသော အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်။. သို့သော်, tandem skydiving သည် အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူများအတွက် စိတ်ပူစရာနှင့် အန္တရာယ်မရှိဘဲ အားကစားကို အတွေ့အကြုံကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။. Tandem Skydiving ၏ခံစားချက်
အဆိုပါ Paintball ကွင်းဆင်းအပေါ်အားပေးမှုပေးခြင်း
ငါ့ 12 နှစ်အရွယ်သားနှင့်2ဒီတနင်္ဂနွေမှာသူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး paintball ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတွင်အသင်းတစ်သင်းအဖြစ်သူ၏သူငယ်ချင်းများကဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကြသည်. သူတို့ဟာတခြားအသင်းတွေထက်ငယ်ရွယ်ပြီးအတွေ့အကြုံမရှိကြဘူး. သို့သော်, ပြိုင်ပွဲတွင်ပါ ၀ င်သူများစွာသည်ဤလူငယ်အသင်းကိုအားပေးမှုအတွက်အံ့သြဖွယ်ရာများပြုလုပ်ခဲ့သည်. – ယောက်ျားလေးတစ် ဦး အသုံးပြုသောပန်းချီကားတစ်ချောင်းသည်ပြိုင်ပွဲကာလအတွင်းစနစ်တကျရပ်တန့်သွားခဲ့သည်. ပါဝင်သူတစ် ဦး ကသူ၏သေနတ်များအားလုံးကိုချေးခဲ့သည်3ယောက်ျားလေးများပြိုင်ပွဲများတွင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဆက်လက်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ဘူး. – အခြားအဖွဲ့များမှဒိုင်လူကြီးများနှင့်ပြိုင်ဘက်များကတစ်နေ့လုံးယောက်ျားလေးများအားအားပေးစကားပြောကြားခဲ့သည်. – သင်တန်းသားများကိုစောင့်ကြည့်အဖြစ်အသင်းတစ်ခုချင်းစီကိုဂိမ်းကစား, သူတို့ဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာအကြံပေးတယ်. ဒီအားပေးမှု၏ရလဒ်အများအပြားအပြုသဘောရလဒ်များရှိခဲ့ပါတယ်. – အဆိုပါယောက်ျားလေးများသူတို့ကစားတစ်ခုချင်းစီကိုဂိမ်းနှင့်အတူတိုးတက်ခဲ့သည်. အားပေးမှုနဲ့အကြံပြုချက်တွေကသူတို့ကိုပိုကောင်းတဲ့ဂိမ်းကစားဖို့ကူညီပေးခဲ့တယ်. – ဆုံးရှုံးမှုပြီးနောက်ရှုံးနိမ့်ခံစားမှု၏, သူတို့ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာနဲ့ဘာတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်. အနိုင်ရတာဟာမျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့ပြီးအရှုံးပေးလိုက်တာလို့ခံစားရဖို့လွယ်ပါတယ်. အခြားသူများ၏အားပေးမှုနှင့်အကြံဥာဏ်များကသူတို့ကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်. – သူတို့ကသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးဂိမ်းအနိုင်ရရှိခဲ့သည်! – သူတို့သည်အနာဂတ် paintball ပြိုင်ပွဲများတွင်ပါ ၀ င်ရန်မျှော်လင့်နေကြသည်. သင်သည်အခြားသူများကိုအားပေးနေသည်? သင်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုအားပေးဖို့ paintball ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရန်မလိုပါ. သင်သည်မည်သူမဆိုအားပေးနိုင်သည်, ဘယ်နေရာမှာမဆို. သင်သိသောလူတစ် ဦး အကြောင်းကိုစဉ်းစားပါ. သင်လုပ်နိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကိုစဉ်းစားပါ. နားထောင်ပေးသူဖြစ်လိမ့်မည်, အားတက်ဖွယ်စကားအချို့, တစ် ဦး လက်ရေးမှတ်စု, သို့မဟုတ်သူသို့မဟုတ်သူမလိုအပ်ကောင်းလိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးအကူအညီအချို့. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, အဲဒါကိုလုပ်နေတာချွတ်မထားပါနဲ့. ယနေ့တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘဝကိုပြောင်းလဲစေပါ. အဆိုပါ Paintball ကွင်းဆင်းအပေါ်အားပေးမှုပေးခြင်း
သငျသညျဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့သင်တစ် ဦး ကိုယ်ခံပညာကိုလေ့ကျင့်သင်တန်းကိုစတင်ချင်တယ်, သင်တို့အတွက်မည်သည့်အကောင်းဆုံးဖြစ်မည်ကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်လိမ့်မည်. ဒါပေါ့, သင်၏ရွေးချယ်မှုကိုသင့်ဒေသရှိရရှိနိုင်သည့်ကျောင်းများကအဆုံးအဖြတ်ပေးလိမ့်မည်, သို့သော်သင်ကံကောင်းပါကအနည်းဆုံးအမျိုးအစားအနည်းငယ်ရွေးချယ်နိုင်လိမ့်မည်. သိုင်းပညာအမျိုးမျိုးရှိသည် (နှင့်ပင်အခြေခံအမျိုးအစားအတွင်းပင်မူကွဲ) ထို့ကြောင့် သင့်ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံနှင့် လိုအပ်ချက်များအတွက် အကောင်းဆုံးကိုက်ညီမှုရှာဖွေရန် နည်းစနစ်များနှင့် အင်္ဂါရပ်များကို သုတေသနပြုလုပ်ရန် အရေးကြီးပါသည်။. ယူနိုက်တက်စတိတ်ရှိလူကြိုက်အများဆုံးစတိုင်ခြောက်ခု၏ဤယေဘုယျရှင်းပြချက်သည်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားကူညီနိုင်သည်. သင်ကြားပို့ချသူများရှိသကဲ့သို့ ကိုယ်ခံပညာပုံစံများကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမှုများလည်း များစွာရှိကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။. ကျောင်းသားများသည် အတန်းတူရှိ အခြားကျောင်းသားများထက် အတန်းကို ကွဲပြားစွာ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုကြသည်။, ထို့ကြောင့် အခြားသူများ၏ ထင်မြင်ယူဆချက်များသည် သင်လိုက်လျှောက်သင့်သည့်ပုံစံအတွက် အကောင်းဆုံး ဆုံးဖြတ်သူမဟုတ်ပေ။. သင့်အတွက် သင့်လျော်သော ကိုယ်ခံပညာကို သင်ကြိုးစားရှာဖွေနေချိန်, စတိုင်လ်ခံစားနိုင်စေရန် အတန်းအနည်းငယ်ကို စမ်းကြည့်ရန်လည်း အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။, နည်းပြနှင့်ကျောင်း. KARATE သမိုင်း ကရာတေးကို 'လက်ဗလာ' ဟု ပြန်ဆိုနိုင်သည်။’ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းသည် လက်နက်မပါဘဲ လုပ်ဆောင်သည့် ကိုယ်ခံပညာဖြစ်သည်။. ကရာတေး၏သမိုင်းသည် အတန်ငယ် မရေမရာဖြစ်နေသော်လည်း၊, ၎င်း၏ရှေးဟောင်းအမြစ်များကို ဘီစီ ၅ ရာစုတွင် တရုတ်နိုင်ငံသို့ ပြန်လည်ခြေရာခံခဲ့သည်။. ပိုခေတ်မီသော Karate ပုံစံသည် အိုကီနာဝါတွင် စတင်ခဲ့သည်။, 1700 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်ဂျပန်. ယခုအချိန်တွင် အိုကီနာဝါတွင် လက်နက်ပိတ်ပင်မှုတစ်ခုရှိနေသည်။, ဒါကြောင့် လူတွေဟာ လက်ဗလာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခုခံကာကွယ်တဲ့ စနစ်နဲ့ ပေါ်ပေါက်လာရတယ်။ ‘ ၎င်းတို့သည် တရုတ်ကိုယ်ခံပညာ၏ သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို Te ရိုးရာနှင့် အိုကီနာဝါသို့ ပေါင်းစပ်ထားသည်။. ၁၉၀၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအစောပိုင်းတွင် ဂျပန်တစ်ခွင်သို့ စတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။. In 1964, ကရာတေးအဖွဲ့များ အဖွဲ့ချုပ်ကို ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်း ကရာတေးအတွက် အဆက်မပြတ်ဖန်တီးရန် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။. သော်ငြားလည်း, ယနေ့ခေတ် Karate ၏ ကွဲပြားသော စတိုင်များနှင့် ကွဲပြားမှုများစွာရှိသည်။. Techniques Karate သည် linear ကိုယ်ခံပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။. လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုသည်။: ကန်, လာကြတယ်, တုံး, သပိတ်မှောက်, ရှောင်လွှဲမှုများနှင့် ပစ်ချခြင်း။. လေ့ကျင့်ရေးသည် ပြင်းထန်သောပြစ်မှုတစ်ခုရှိခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ပြီး အနုပညာနယ်ပယ်သုံးရပ်တွင် တူညီသောအရေးပါမှုရှိသည်။: အခြေခံများ, sparring နှင့်ပုံစံများ. အင်္ဂါရပ်များ ‘ ကရာတေးလေ့ကျင့်သူများသည် ၎င်းတို့၏ တင်ပါးများကို စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန် အသုံးပြုကြသည်။. ‘ အဆင့်များ, တန်ဖိုးများနှင့် ပုံစံများသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု မတူညီပါ။. ‘ ကရာတေး, မာကြောပြီး ဖြောင့်တန်းနိုင်သည်။, အလွန်စည်းကမ်းရှိပြီး အချို့သော ရိုးရာကျောင်းများသည် အလွန်ကြမ်းတမ်းပုံရသည်။. AIKIDO သမိုင်း Daito Ryo Aikijo-Jitsu ၏ ရိုးရာအနုပညာများ၏ လွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးပြုခြင်း။, ဂျပန်ခြံစည်းရိုး, လှံနှင့် Omotokyo တိုက်ပွဲ, Moriehie Usehiba သည် Aikido ၏ ကိုယ်ခံပညာကို တီထွင်ခဲ့သည်။ ('ငြိမ်းချမ်းသော အနုပညာ'). ဒီနာမည်ကို သူပထမဆုံးသုံးတယ်။ 1942. ဤအနုပညာ၏အခြေခံသည် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှုအစား အကာအကွယ်ပေးသည့်စိတ်ဓာတ်ဖြင့် နေထိုင်ရန်ဖြစ်သည်။. အိုက်ကီဒိုအနုပညာကို တိုကျိုရှိ နိုင်ငံတကာ အိုက်ကီဒိုအဖွဲ့ချုပ်က အုပ်ချုပ်သည်။, ဂျပန်. Techniques Aikido သည် စက်ဝိုင်းကိုယ်ခံပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။. ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်မှုကို အနိုင်ယူမည့်အစား၊, Aikido သည် ၎င်း၏ပါဝင်သူများကို အနုတ်လက္ခဏာစွမ်းအင်ကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ပြန်ညွှန်းရန် သင်ကြားပေးသည်။. ယင်းသည် ပဋိပက္ခများကို ငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းရန် ကတိကဝတ်များ နှင့် လေ့ကျင့်ခြင်းအားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို မြှင့်တင်ရန် ကတိကဝတ်များ ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။. Aikido လေ့ကျင့်သူများသည် ပစ်ခြင်းနှင့် ပင်များ အသုံးပြုခြင်းအပြင် ၎င်းတို့၏ တိုက်ခိုက်သူများကို မည်ကဲ့သို့ ထိန်းထားရမည်နည်း။. သူတို့သည် လက်သီးနှင့်ထိုးခြင်းကို မသုံးကြပါ။, အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းမှလွဲ၍. အနုပညာ၏ အခြေခံမှာ တိုက်ခိုက်သူအား ရပ်တန့်ရန်အတွက် တိုက်ခိုက်သူ၏ ချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းချုပ်ရန် တိုက်ခိုက်မှုမျဉ်းမှနေ၍ မည်သို့နေထိုင်ရမည်ကို လေ့လာရန်ဖြစ်သည်။. အင်္ဂါရပ်များ ‘ Aikido သည် လက်နက်များကို အသုံးပြုသည်။: ပြီးပြီ။ (က 4-5 ခြေရှည်ဝန်ထမ်း), ပေးပြီး၊ (သစ်သားဓား) နှင့် တန်တို (သစ်သားဓား). ‘ Aikido သည် အကြမ်းမဖက်သောနည်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ခြင်း ဖြစ်သည်။. ‘ ခါးပတ်များ၏ အရည်အသွေးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ်ထားသည်။. ‘ Aikido သည် အခြား ကိုယ်ခံပညာများ တွင် တူညီသော ကန်ချက် အများအပြား မရှိပါ။. JUDO သမိုင်း Dr. Jigro Kano သည် ကျောင်းသားဒဏ်ရာအားလုံးကို စိတ်ပျက်မိသောကြောင့် Tenjin Shinyo ryo School of Ju-Jitsu တွင် စာရင်းသွင်းပြီးနောက် ဂျူဒိုကို တီထွင်ခဲ့သည်။. ဂျူဒိုသည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ကိုယ်ခံပညာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပါဝင်သူများသည် မိမိကိုယ်ကို ပြီးပြည့်စုံစေရန်နှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် တန်ဖိုးတစ်ခုဖြစ်လာစေရန် ကြိုးပမ်းကူညီပေးသည်။. ဂျူဒို, ဆိုလိုသည်မှာ 'နူးညံ့သိမ်မွေ့သောလမ်း'၊, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်စေသည်။, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဝိညာဉ်ရေးရာကျန်းမာရေး. ဂျူဒိုပစ်ခြင်းနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။, ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။, တံ, ကိုင်ထားသည်။, သော့ခတ်ပြီး ဝမ်းချုပ်တယ်။. သို့သော်, သင်တန်းသည် ဘေးကင်းရေးကို အလေးထားပါသည်။ ‘ ပါဝင်သူများသည် ထိပ်တန်းအေးစက်မှုဆီသို့ ဦးတည်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ပြီး ဂျူဒိုကို ဖျာပေါ်တွင် အမြဲလေ့ကျင့်လေ့ရှိသည်။. ဂျူဒိုပါဝင်သူများသည် ပစ်ခြင်း နှင့် ပစ်ခြင်းစသော ပုံစံများဖြင့် အနုပညာကို သင်ယူကြသည်။ ‘ အပြိုင်အဆိုင် ဂျူဒိုများတွင် ဒဏ်ခတ်မှုများ မရှိပါ။. အင်္ဂါရပ်များ ‘ ဂျူဒိုတွင် တင်းကျပ်သော စည်းမျဉ်းများ နှင့် ရှင်းလင်းသော သင်ကြားပို့ချမှု အစီအစဉ်များ ရှိသည်။. ‘ ဂျူဒိုစည်းမျဉ်း, လေ့ကျင့်ရေးနှင့် အဆင့်များသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် မျှတစွာ စံပြုထားသည်။. ‘ ဂျူဒိုသည် ပြီးပြည့်စုံသော ခန္ဓာကိုယ်ထိန်းချုပ်မှုကို တိုးတက်စေရန် ကူညီပေးသည်။, ကောင်းမွန်မျှတမှုနှင့် လျင်မြန်သောတုံ့ပြန်မှုများ. ‘ ဂျူဒိုသည် ဆုပ်ကိုင်မှုများစွာကို အသုံးပြုသည်။, လှဲ, သိမ်းပိုက်ခြင်းနှင့်မြေပြင်အလုပ်. ဒီအတွက်ကြောင့်, မကြာခဏ နပန်းသတ်ခြင်းကို သတိရစေသည်။. တိုက်ကွမ်ဒိုသမိုင်းကြောင်း တိုက်ကွမ်ဒို၏အစကို ဝေးဝေးမှခြေရာခံနိုင်သည်။ 30 B.C., ခေတ်သစ် တိုက်ကွမ်ဒိုသည် ကိုရီးယားနိုင်ငံ လွတ်မြောက်ပြီးနောက် စတင်ခဲ့သည်။ 1945. ကိုရီးယားလူမျိုးများသည် ကိုယ်ခံပညာအပေါ် ဂျပန်လွှမ်းမိုးမှုအားလုံးကို ချေမှုန်းပစ်ချင်ကြသည်။, ဒါကြောင့် သူတို့ဟာ ကိုရီးယား ကိုယ်ခံပညာကျောင်းတွေနဲ့ စတိုင်လ်တွေကို အမျိုးသားအားကစားကို ဖန်တီးဖို့ စတင်ခဲ့ပါတယ်။. နာမည်က တိုက်ကွမ်ဒိုပါ။ ("လက်နှင့်ခြေလမ်း") တွင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ 1965. 1973 ကမ္ဘာ့တိုက်ကွမ်ဒိုအဖွဲ့ချုပ်၏ အစပြုခြင်းဖြစ်ပါသည်။. အိုလံပစ်ပွဲတော်၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ 2000. တိုက်ကွမ်ဒို နည်းစနစ်တွင် ပုံစံများ အပါအဝင် ပညာရပ် လေးခု ပါဝင်သည်။, sparring, မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်ခြင်းနှင့် ဖောက်ထွင်းစမ်းသပ်ခြင်း။. တိုက်ကွမ်ဒိုသည် အဓိကအားဖြင့် ကန်ခြင်းအနုပညာဖြစ်ပြီး အားကစားကို အလွန်အလေးပေးပါသည်။. တိုက်ကွမ်ဒိုလေ့ကျင့်သူများသည် အတွေးအခေါ်ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်သည်။, စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စည်းကမ်းနှင့် စွမ်းရည်တို့ကို လေ့ကျင့်ပေးသည်။. အင်္ဂါရပ်များ ‘ တိုက်ကွမ်ဒိုသည် ၎င်း၏ မြင့်မားသော ကန်ချက်များဖြင့် မှတ်မိနိုင်သည်။. ‘ တိုက်ကွမ်ဒို ခါးပတ်နက် စာမေးပွဲသည် အနားယူ စာမေးပွဲ လိုအပ်သည်။. ‘ တိုက်ကွမ်ဒိုလေ့ကျင့်ရာတွင် ရန်သူကိုတိုက်ခိုက်ရန် အရေးကြီးသောအချက်များအသုံးပြုခြင်း ပါဝင်သည်။. ‘ တိုက်ကွမ်ဒိုကျောင်းတွေမှာ မကြာခဏ အထက- အားကစား- ဦးတည်သည်။. ‘ တိုက်ကွမ်ဒို ကျောင်းသားများသည် ပြိုင်ပွဲများစွာတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ရန် မျှော်လင့်လေ့ရှိသည်။. T'AI CHI သမိုင်း T'ai Chi ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ('အမြင့်မြတ်ဆုံး' ဟု ဘာသာပြန်သည်) Chang San-feng အား ဂုဏ်ပြုပါသည်။, ဒါပေမယ့် Wang Chung-yueh နဲ့ Chiang Fa တို့က မူရင်းအနုပညာကို အသေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။. သူတို့က San-feng ကိုယူတယ်။ 13 ကိုယ်ဟန်အနေအထားများနှင့် ၎င်းတို့ကို ချိတ်ဆက်ထားသည့် စဉ်ဆက်မပြတ် အစီအမံများကို ဖန်တီးထားသည်။. T’ai Chi သည် ခုခံအား အလွန်ကောင်းသည့် အနုပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ‘ သေစေတယ်။. ဒီလောက်ပါပဲ။, အဲဒါကို သိတဲ့ မိသားစုတွေက ပြင်းပြင်းထန်ထန် စောင့်ရှောက်တယ်။. အခု, T’ai Chi သည် အကြမ်းမဖက်နည်းဖြစ်ပြီး ဖိစီးမှုနှင့် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကဲ့သို့သော ပုံဆောင်ရန်သူများကို ဖယ်ရှားရန် အသုံးပြုသည်။. နည်းပညာများ T’ai Chi လေ့ကျင့်သူများသည် လက်နက်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။, ဒါပေမယ့် အရင်းခံ သီအိုရီကတော့ စိတ်ကို စုစည်းဖို့ အနုပညာကို အသုံးပြုတာ ဖြစ်ပါတယ်။, ခန္ဓာကိုယ်နှင့် ဝိညာဉ်. အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ စွမ်းအင်တွေကို ကိုယ်နဲ့ဝေးရာကို လမ်းပြဖို့ အခု မကြာခဏ သုံးပါတယ်။. T’ai Chi လေ့ကျင့်ရန် နည်းလမ်းနှစ်ခုရှိသည်။. ရှည်ရှည်လျားလျား ပုံစံယူလို့ရတယ်။ 30 တိုတောင်းသောပုံစံသည် မိနစ်ထက်နည်းသော်လည်း အချိန်ပိုကြာနိုင်သည်။ 10 မိနစ်များ. ပုံစံများသည် စိတ်အပန်းပြေစေပြီး ခိုင်မာသောရပ်တည်မှုဆီသို့ ဦးတည်သည့် စဉ်ဆက်မပြတ်လှုပ်ရှားမှုအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။. တိုင်ချီမှာ, လက်တစ်ဖက်စီသည် ခန္ဓာကိုယ်၏ တစ်ဝက်ကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုကြပြီး လက်များသည် ခြေချောင်းများကို ကျော်လွန်၍ ဘယ်သောအခါမှ မရောက်နိုင်ပါ။. တိုင်ချီ တစ်ယောက်တည်း လုပ်လို့ရတယ်။ (ပုံစံများ) သို့မဟုတ် အဖော်နှင့် (မိမိကိုယ်ကို ကာကွယ်ရေး သင်တန်း). အင်္ဂါရပ်များ ‘ T’ai Chi သည် ဟန်ချက်ညီမှုကို သတိပြုမိပြီး မိမိကိုယ်ကိုရော အခြားသူများအပေါ်ပါ အကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အရာများကို သင်ကြားပေးသည်။. ‘ T’ai Chi တွင် အဓိက ပုံစံငါးမျိုးရှိသည်။, ဒါပေမယ့် အမြဲတမ်း အသစ်အသစ်တွေ ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်။. ‘ T’ai Chi ၏ မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်မှု၏ အခြေခံမှာ တွန်းလှန်မည့်အစား လမ်းကြောင်းပြန်ညွှန်နိုင်သည်အထိ တွန်းလှန်ရန် ဖြစ်သည်. ‘ T’ai Chi သည် နှေးကွေးသော လှုပ်ရှားမှုများကို အာရုံစိုက်သည်။, ဒါကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့ကျင့်ခန်းကို နှစ်သက်သူတွေဟာ ဒီကိုယ်ခံပညာကို ငြီးငွေ့ပြီး နှေးကွေးတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။. KUNG FU သမိုင်း ကွန်ဖူး ('ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် အားထုတ်မှု' ဟု ဘာသာပြန်သည်) အမှန်တကယ်တော့ over ကိုရည်ညွှန်းပါတယ်။ 200 ကိုယ်ခံပညာစတိုင်များ (အများစုမှာ တရုတ်ကိုယ်ခံပညာမှ အရင်းတည်သည်။). ကွန်ဖူးကို ကျန်းမာရေးနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဘုန်းကြီးများက အသုံးပြုခဲ့သည့် ရှိုလင်ဘုရားကျောင်းများသို့ ပြန်လည်ခြေရာခံနိုင်သည် ။. အစောပိုင်း 1900 ခုနှစ်များအတွင်း, ကွန်ဖူး, Wu Shu လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။, တိုက်ပွဲအနုပညာသည် တရုတ်ပြည်တစ်ခွင်တွင် အလွန်ရေပန်းစားလာခဲ့သည်။. 1960 နှင့် 70s များတွင် Bruce Lee ဇာတ်ကားများကြောင့် Kung Fu ၏ကျော်ကြားမှု၊. Techniques ကွန်ဖူးသည် တရုတ်ယဉ်ကျေးမှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်ပြီး ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့် အနုပညာအသုံးအနှုန်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။. Kung Fu ၏ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်, နည်းပညာတွင် hard နှင့် linear မှ soft နှင့် circular ကွဲပြားမှုများရှိသည်။. တချို့က လက်နက်သုံးတယ်။ (ဘုံဓားအပါအဝင်, သိရန်, လှံ၊) တခြားသူတွေက မလုပ်ကြဘူး။. ၎င်းတို့အားလုံးကို ဖြတ်၍ သာမန်ဟုထင်ရသော ကြိုး၊, သို့သော်, ကျောင်းသားများကို ဆရာနှင့် အခြားကွန်ဖူးပုံစံများကို လေးစားတတ်အောင် သင်ကြားပေးရန်ဖြစ်သည်။. ကွန်ဖူးတို့လည်း လိုအပ်တယ်။ (အပြင် ဆောက်တယ်။) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားအပြင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခွန်အားကိုပါ အောင်အောင်မြင်မြင် လေ့ကျင့်ပါ။. ကွန်ဖူး ကျောင်းသားများသည် နည်းစနစ်အချို့ကို တစ်ဦးချင်းနှင့် အခြားအဖွဲ့များဖြင့် လေ့ကျင့်လေ့ရှိသည်။. ကျောင်းတော်တော်များများမှာ, စတင်လေ့ကျင့်ခြင်းသည် Southern Fist ဟုခေါ်သည့်ပုံစံဖြင့် စတင်သည်။. ၎င်းတွင် ခြေလျင်အလုပ်ပါ၀င်သည်။, ကန်သွင်းခြင်းနှင့် လက်တိုက်ခိုက်ရေးနည်းစနစ်များ. အင်္ဂါရပ်များ ‘ Kung Fu သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ ရာနှင့်ချီသော ကိုယ်ခံပညာပုံစံအမျိုးမျိုးကို ရည်ညွှန်းသည်။. ‘ Kung Fu လေ့ကျင့်သူများသည် လက်သီးတိုက်ခိုက်ခြင်းအပါအဝင် မတူညီသော တိုက်ပွဲနည်းစနစ်များစွာကို လေ့လာသင်ယူကြသည်။, လက်နက်တိုက်ပွဲ, လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များနှင့် တိုက်ပွဲများ. ‘ ကွန်ဖူးပုံစံများစွာသည် အလားတူပင်အုပ်များကို အသုံးပြုကြသည်။, သင့်လျော်သောအစားအစာ, နှင့်အသက်ရှူခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် တရားထိုင်လေ့ကျင့်ခန်းများ. ‘ အချို့ကွန်ဖူးပုံစံများသည် လက်နက်များကို အသုံးပြုကြပြီး အချို့ကမူ ကွန်ဖူးပုံစံများမဟုတ်ပေ။. ‘ Kung Fu လေ့ကျင့်ခန်းသည် အဆစ်များကို သန်မာစေပြီး အရှိန်နှင့် တုံ့ပြန်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အေးစက်မှုကို တိုးတက်စေသည်။. ‘ Kung Fu သည် အခြားသော ကိုယ်ခံပညာများထက် အဓိက ကွာခြားချက်မှာ အပြင်ဘက်တွင်သာ အာရုံစိုက်ခြင်း မဟုတ်ဘဲ၊, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းအား, ဒါပေမယ့် အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းနဲ့ တရားထိုင်ခြင်းအားဖြင့် စိတ်နဲ့ အတွင်းစွမ်းအားကို လေ့ကျင့်ပေးခြင်းလည်း ပါဝင်ပါတယ်။. ဒီအချက်အလက်ကို သင်အသုံးဝင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။. ချန်ထားခဲ့တဲ့ ပုံစံအားလုံးကို ဖုံးအုပ်ထားနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။, ဒါပေမယ့် အဲဒါလုပ်ဖို့ စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး ယူရလိမ့်မယ်။. ဘယ်ပုံစံက သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေရှိရင်, ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်အား ဖုန်းခေါ်ဆိုရန် သို့မဟုတ် အီးမေးလ်ပို့ပါ။. ရိုးသားစွာ, Robert Jones Master Instructor Kempo ကိုယ်ခံပညာအကယ်ဒမီ သိုင်းပညာကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ။
Many of us recall old movie images of golfers in plaid pants, sweater vests, billed caps, and other stereotypical apparel of golfing lore. While clothing on golf courses has changed over the years, proper golf apparel is still expected. And the greater the prestige of the golf club, the greater the expectation you will abide by their dress code. Most clubs and courses, even the public ones, require that golfers followadress code. The most common rule is the collared shirt. Many courses require long pants, not jeans, and golf shoes.5Minutes Early Is Late When it comes to actually starting your game, the primary rule of etiquette is to show up on schedule for your tee time. That means you will have already done everything else in preparation for the start of the golf game. You’ll need time to park your car, warm up, လေ့ကျင့်သည်, buy balls, change, and pick upacart. Being early isamatter of consideration for others. Leave Cell Phones In The Real World The exclusion of cell phones from golf apparel is another common courtesy on the links. Cell phones should be left in your car or locker. If you do need to bring 1 onto the course for emergencies, keep it turned off. When you’re on the course, you’ll need to understand how the other golfers in your group want to play. Some let the best score tee off on the next hole, while others let whoever is ready tee off first. You can offend players by not following their rules, even if their rules are, from your perspective, wrong. Time-Honored Conventions Make Golfing Unique An obsession with quiet is another characteristic for which golfers are known. Like most traditions, this one is based on necessity. When your object is to hitasmall object withalong pole, you need all of your concentration. Even when golfing with friends, respect the fundamental rule of keeping quiet during shots, and standing out of the direct line of vision. Today’s golfing rules of etiquette can seem archaic —athrowback to days of old. They harken back toaslower paced time when consideration for others was perhaps easier. In the 21st century, golfing provides usatime away from the bustle of everyday living. Though golf is highly competitive, ဟုတ်တယ်, nonetheless,agentleman’s — and gentlewoman’s — ဂိမ်း. Golf Apparel — The Start Of Good Golf Etiquette
No matter what level of experience you have asafisherman, you will benefit greatly from having the right reel for the job. You can easily learn what you should be using though and improve your skill because of it. There are three different types that you need to consider. These are the casting reel, the fly casting reel and the spin casting reel. The Bait Casting Reel These are quite difficult. The line on them is pulled off the rod by the lure’s weight. It is then thrust forward in the motion of casting. They provideadevice that lays the line evenly across the rotating cylinder that acts like the core of the reel. Withoutasmooth cast it will cause problems when the line is reeled in. The line can become tangled, အရမ်း. The Fly Fishing Reel Inafly fishing real, you need to insure that it hasadrag that is very responsive. ထိုအခါ, you’ll need to purchaseareel that can stand the tension and strain put on it byalarge fish. These are more expensive reels than other types. Make sure to check to make sure there are no plastic parts on the reel. All metal reels are much more dependable and they make it worth the price. The Spinning Reel The closed faced reel is the inexpensive spinning reel. It is also fairly easy to control. This is probably the choice you would make for those who are learning to fish. They haveapush button release for casting. They have an opening at the top where the line comes out when you cast. The reel will mount on your rod. The open faced spinning rod isamore challenging option. It comes in many sizes to fit your needs. The lightest models are excellent for pan fish. Larger choices will help you with game fishing or ocean fishing. The line capacity on these is greater and is serviceable when you are after trout or even salmon. They offerasmooth drag. Although you can start withaclosed face, you can improve your skills and move on to the open faced. If you are only choosing one type of reel, go withamedium speed one. If two, then look for bothalow speed andahigh speed. ဒါ့အပြင်, you should choose the right reel depending on if you are left handed or right handed. ဒါ့အပြင်, remember that the lighter the line is, the smaller the reel. You’ll need to insure that the fishing line and the fishing reel will work together well. You can get help with learning what type of reel to purchase from the salespeople at the fishing tackle shop. Angling Basics: What You Need To Know About Fishing Reels
မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဝါသနာရှင်များစွာကအိတ်ကပ်စက်ဘီးကိုသဘောတူကြသည် “မော်တော်ဆိုင်ကယ်အနုပညာအလုပ်။” အိတ်ဆောင်စက်ဘီးသည်အားကစားပြိုင်ပွဲတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်, လူမျိုး၏တိုးပွားလာပြသထားတယ်အဖြစ်. အိတ်ဆောင်စက်ဘီးသည် MotoGP ပြိုင်ပွဲအားလုံး၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည်. အိတ်ဆောင်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲသည်ဈေးအသက်သာဆုံးမော်တော်ကားဖြစ်သည်. အချို့ကပင်ကောင်းမွန်စွာစီးနင်းနိုင်စွမ်းသည်ဟန်ချက်ညီမှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်, မိမိကိုယ်အားထိန်းချုပ်ခြင်း, သွက်လက်, အိတ်ဆောင်စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်လိုအပ်သောမြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှုအချိန်သည်လမ်းများပေါ်တွင်အပြည့်အရွယ်ရှိမော်တော်ဆိုင်ကယ်များကိုအသုံးပြုတတ်ရန်သင်ယူရာတွင်အထောက်အကူပြုသည်။. သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ၃၈ မှ ၄၇ အထိသာရှိသေးသည်″ ရှည်လျားသောနှင့်ထက်နည်း 50 ပေါင်, သူတို့ကမဆိုအပိုဆောင်းထောက်ခံမှုပစ္စည်းကိရိယာများမပါဘဲသယ်ယူပို့ဆောင်နိုင်ပါသည်, ပင်ကားတစ်စီးပင်စည်သို့မဟုတ် backseat ၌တည်၏! အိတ်ဆောင်စက်ဘီးကိုကားရပ်နားရန်နေရာသို့မဟုတ် Go-Kart လမ်းကြောင်းများ၌ပြေးနိုင်သည်, ၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နေသောမော်တော်အားကစားတစ်ခုဖြစ်သည်. ဤစက်ဘီးသည်မည်သည့်အသက်အရွယ်အတွက်မဆိုသင့်လျော်သည် 16 နှင့်တက်, ရန် 300 လူကြီးများပေါင်, သငျသညျအသီးအသီးပေးလိမ့်မည်ဟုစက်ဘီးအမျိုးအစားသိသာသော်လည်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားသည်. သေးငယ်တဲ့ကလေးငယ်များအတွက်ဒီဇိုင်းသေးသောအိတ်ကပ်စက်ဘီးများရှိပါသည်, ဒါပေမယ့်သတိထားဆဲအသုံးပြုသင့်ပါသည်. အိတ်ဆောင်စက်ဘီးသည် minimotos ၏အမြွှာများဖြစ်သောကြောင့်ပြိုင်ဆိုင်မှုအတွက်ရည်ရွယ်သည်. ၎င်းတို့သည်ပြိုင်ပွဲနှင့်မြေယာအတွက်သာရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်, အဝေးပြေးလမ်းမအတွက်အသုံးပြုရန်မဟုတ်ပါ. သံခမောက်, အကာအကွယ်ဂီယာ, ထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအနည်းဆုံးဖြစ်စေရန်အတွက်လည်ပတ်နေစဉ်အတွင်းလက်အိတ်များနှင့်ဖိနပ်များကို ၀ တ်ဆင်သင့်သည်. အောက်ရှိကလေးများ 18 လူကြီးများ၏တင်းကျပ်သောကြီးကြပ်မှုအောက်တွင်ဤသို့မဟုတ်အခြားစက်တပ်ဆင်ထားသည့်စက်ပစ္စည်းများကိုသာအသုံးပြုသင့်သည်. အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ MotoGP ချန်ပီယံအများအပြားသည် Pocket ဆိုင်ပြိုင်ပွဲနှင့်စတင်ခဲ့သည်. အကောင်းဆုံးသာဓကကတော့ Valentino Rossi. သူသည်အီတလီ Pocketbike Champ ဖြစ်သည် 125, 250, 500 နှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ 1000cc MotoGP World Champ. သောမတ်စ်လူသာသည်ဆွစ်ဇာလန်အိတ်ကပ်ဆိုင်ကယ်အငယ်တန်းချန်ပီယံဖြစ်သည်. သူကအခြားသူများကိုနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်, ထိုကဲ့သို့သောဗင်းဆင့် Braillard အဖြစ်. လာမယ့်ဆွစ်ဇာလန်ထိပ်တန်းမြင်းစီးသူရဲများရှိလိမ့်မည်ဟုသံသယမရှိပါ, Swiss Pocketbike Championship သည်အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးသူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. တဆင့်နှင့်မှတဆင့်တန်ဖိုး
Should one decide to play golf, the essential thing thataperson needs isaset of golf clubs. Most people who are not sure whether to invest more in the game prefer to borrowaset provided by the club or buyaused one. A person can acquireasecond hand set fromagolf specialty store or buy it fromaprofessional golfer who may want to sell the used set to buyanew one. When that person feels that one is ready to get serious with the sport, the individual may now decide to buyabrand new one. Here are some tips one should know when learning how to play golf and choosingaset of clubs: 1. There are many brands of golf clubs available. Before buying one, it is best to feel the grip of each so one can choose the right set that the person will be comfortable with while playing in the green. 2. Shafts come in different lengths which are determined by the height of the person. If one is unsure of which is the correct one for the individual, it is best to ask the assistance of the salesperson. 3. A little knowledge of the various clubs will helpaperson in choosing one even if these are usually sold in sets. A typical set of irons thataperson can buy are numbered from3ရန်9and includesapitching wedge. 4. Another thingaperson needs to play golf isaputter. Just like choosing the right set, the person should feel the grip and how comfortable it is from the brands available in the specialty store before buying it. 5. Errant shots are some things that can’t be helped, especially in the sport of golf. This is the reason why the person should be familiar with the various club designs since some clubs have made restrictions on this. Bladed clubs are the most recommended for golfers since it gives better precision in every shot that takes skilled hands to accomplish. 6. To maintain the golf clubs, it is best to useawire brush orasmall towel to keep these in good condition. 7. A person needs golf balls to putt into the hole. If one is just getting into the game, it is advisable to buyacheap set of balls first rather than an expensive one since some shots might fall into the water or in the forest that will just get lost which is just like throwing money into the air. ဂေါက်ဝါသနာရှင်အဖွဲ့ 101
အဘယ်အရာကိုချွတ် Poker အတွက်အဝတ်အစားအဖြစ်မှတ်? လူများစွာသည်အဝတ်အစားများချွတ်ထားသည့်ဖဲချပ်ဝတ်တန်ဆာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားသောအမြင်ရှိသည်. ၏သင်တန်းဂျင်းဘောင်းဘီကဲ့သို့သောအဝတ်အစား၏သိသာပစ္စည်းများရှိပါသည်, ဘောင်းဘီ, ရှပ်အင်္ကျီများ, အင်္ကျီ, အတွင်းခံအဝတ်အစား, နှင့်တော်တော်လေးဘုံကြောင်းအရာအားလုံးထက်. အငြင်းအခုန်အများဆုံးပေးသောပစ္စည်းများမှာနားကပ်ကဲ့သို့ပစ္စည်းများဖြစ်သည်, ဦး ထုပ်, ဖိနပ်, ခြေအိတ်, နှင့်ကွင်း. ငါကိုယ်တိုင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုအဝတ်အစားလို့မသတ်မှတ်ပေမဲ့လူတိုင်းမှာသူတို့မှာကိုယ်ပိုင်နည်းလမ်းရှိတယ်. သင့်ရဲ့ဖဲချပ်ဂိမ်းကိုမစခင်မှာအဝတ်အစားဆိုတာဘာလဲ၊. မင်းဟာမင်းရဲ့ Poker ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ကစားနိုင်မယ်လို့ငါထင်တယ်. ဒီတော့ဒီမှာသင့်ရဲ့ဖဲချပ်ဂိမ်းကိုဘာဝတ်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအချက်နှစ်ချက်ရှိတယ်. ပထမ ဦး ဆုံးနှင့်သင်ပထမ ဦး ဆုံးအသငျသညျချီးမွမ်းကြောင်းအဝတ်အစားဝတ်ဆင်. မင်းကြည့်ကောင်းတာကိုမင်းသိတယ်. ဟာသမဟုတ်ရင်ထူးဆန်းတဲ့အဝတ်အစားတွေမဝတ်ပါနဲ့. သာမန်ထဲကတစ်ခုခုကို ၀ တ်ဆင်ထားတယ်ဆိုပါစို့. ထို့နောက်မလုပ်ဘဲနှင့်တတ်နိုင်သမျှအ ၀ တ်အစားများကိုကြိုးစားဝတ်ဆင်ပါ. အဓိကအချက်ကအနိုင်ရဖို့ပဲ. သင်အလျင်အမြန်ဂိမ်းထဲကဖြစ်လိမ့်မည်အဖြစ်တစ်ခုမှာအပိုင်းအစအဝတ်ကိုမ - အဘယ်သူမျှမဖြစ်ကြသည်. ထို့အပြင်အင်္ကျီများနှင့်ထိုသဘောသဘာဝကိုဝတ်ဆင်ရန်ကြိုးစားပါ, သငျသညျကဝေးရနိုင်လျှင်. အဝတ်စများဖြင့်ရေတွက်နိုင်သည့်အရေအတွက်ကိုကန့်သတ်သောချောသောဖဲချပ်ပြိုင်ကစားခြင်းဂိမ်းများတွင်စည်းမျဉ်းများရှိသည်, သင်ဤဂိမ်းများကိုတ ဦး တည်းကိုဖြတ်ပြီး run ဖို့ဖြစ်ပျက်လျှင်ကောင်းသောကံ. ယေဘုယျအားဖြင့်အဝတ်အစားချွတ်သော Poker တွင်သင်၏အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်သောအခါသင်နှစ်သက်သောအဝတ်အစားကိုလိုချင်သည်. သင့်ရဲ့ဖက်ရှင်အသွင်အပြင်မဟုတ်ဘဲမဟုတ်လျှင်အထဲတွင်တွင်းနှင့်အတူဘာမှမဝတ်ပါနဲ့. အကယ်၍ သင့်အတွင်းခံအဝတ်အစားများသို့မဟုတ်ခြေအိတ်များတွင်အပေါက်များရှိလျှင်တော်တော်ရှက်စရာကောင်းနိုင်သည်. ထို့အပြင်ချွတ်ယွင်းသောဖဲချပ်ကစားနေစဉ်အချိန်အတော်ကောင်းပြီးအနားယူရန်သေချာပါစေ. Poker အဝတ်အထည်များအဝတ်စုတ်
အမျိုးအစား / အားကစားသတင်းခေါင်းကြီးပိုင်းဆောင်းပါးများ
Gvmg – ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ကမ္ဘာ့ Virtual ငွေကြေး / Cryptocurrency / အသစ်ကဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Portal ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်
「အားကစားသတင်းသတင်းခေါင်းစဉ်များ Global Articles WebSite.WS lines
အိုင်ယာလန် - အဇာဘိုင်ဂျန် - အာဖဂန်နစ္စတန် - အမေရိက(ယူအက်စ်အေ) - အာရပ် - အယ်လ်ဂျီးရီးယား - အာဂျင်တီးနား - အယ်လ်ဘေးနီးယား - အာမေးနီးယား - အင်ဂိုလာ - Antigua နှင့် Barbuda - အန်ဒိုရာ - ယီမင် - ဗြိတိသျှ - မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန် - အင်္ဂလန်(ဗြိတိန်) - အစ္စရေး - အစ္စလာမ် - အီတလီ - အီရတ် - အီရန် - အိန္ဒိယ - အင်ဒိုနီးရှား - ယူဂန်ဒါ - ယူကရိန်း - ဥဇဘက်ကစ္စတန် - ဥရုဂွေး - အီကွေဒေါ - အီဂျစ် - အက်စ်တိုးနီးယား - ဆွာဇီလန်၌တည်၏ - အီသီယိုးပီးယား - အီရီထရီးယား - ကယ်တင်ရှင် - သြစတြေးလျ - သြစတြီးယား - အိုမန် - နယ်သာလန် - ဂါနာ - ကိပ် Verde - ဂိုင်ယာနာ - ကာဇက်စတန် - ကာတာ - ကနေဒါ - ဂါဘွန်း - ကင်မရွန်း - ကိုရီးယား - ဂမ်ဘီယာ - ကမ္ဘောဒီးယား - မြောက်ကိုရီးယား - မြောက်ပိုင်းမက်ဆီဒိုးနီးယား - ဂီနီယာ - ဂီနီ -bissau - ဆိုက်ပရပ်စ် - ကျူးဘား - ဂရိ - ကီရီဘာတီ - ကာဂျစ္စတန် - ဂွာတီမာလာ - ကူဝိတ် - ကွတ် - ဂရီနာဒါ - ခရိုအေးရှား - ကင်ညာ - အိုင်ဗရီကို့စ် - ကော့စတာရီကာ - ကိုဆိုဗို - Comoros - ကိုလံဘီယာ - ကွန်ဂို - ဆော်ဒီအာရေဗျ - ဆာမိုအာ - Sao Tome Principe - ဇမ်ဘီယာ - စန်မာရီနို - ဆီးရီးယားလီယွန်း - ဂျီဘူတီ - ဂျမေကာ - ဂျော်ဂျီယာ - ဆီးရီးယား - စင်္ကာပူ - ဇင်ဘာဘွေ - ဆွစ်ဇာလန် - ဆွီဒင်နိုင်ငံ - ဆူဒန် - စပိန် - ဆူရီနာ - သီရိလင်္ကာ - စလိုဗက်ကီးယား - ဆလိုဗေးနီးယား - Seychelles - အီကွေတာဂီနီ - ဆီနီဂေါ - ဆားဘီးယား - စိန့်ကစ်နှင့်နီဗီစ် - စိန့်ဗင်းဆင့် - လက်ပစ်ဗုံး - စိန့်လူစီယာ - ဆိုမာလီယာ - ဆော်လမွန်ကျွန်းစု - ထိုင်းနိုင်ငံ - တာဂျစ်ကစ္စတန် - တန်ဇန်းနီးယား - ချက် - ချဒ် - ဗဟိုအာဖရိက - တရုတ် - တူနီးရှား - ချီလီ - တူဗာလူ - ဒိန်းမတ် - ဂျာမနီ - သွားရန် - ဒိုမီနီကန် - ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂိုသမ္မတနိုင်ငံ - Turkmenistan - ကြက်ဆင် - တွန်ဂါ - နိုင်ဂျီးရီးယား - Nauru - နမီးဘီးယား - နီယို - နီကာရာဂွာ - နိုင်ဂျာ - ဂျပန် - နယူးဇီလန် - နီပေါ - နော်ဝေး - ဘာရိန်း - ဟေတီ - ပါကစ္စတန် - ဗာတီကန် - ပနားမား - ကဗျာ - ဘဟားမား - ပါပူဝါနယူးဂီနီ - ပလောင် - ပါရာဂွေး - ဘာဘေးဒိုးစ် - ဟန်ဂေရီ - ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် - အရှေ့တီမော - ဖီဂျီ - ဖိလစ်ပိုင် - ဖင်လန် - ဘူတန် - ဘရာဇီး - ပြင်သစ် - ဘူဂေးရီးယား - Burkina Faso - ဘရူနိုင်း Darussalam - ဘူရွန်ဒီ - ဗီယက်နမ် - ဘီနင် - ဗင်နီဇွဲလား Bolivar - ဘီလာရုစ် - ဘေလီဇ် - ပီရူး - ဘယ်လ်ဂျီယံ - ပိုလန် - ဘော့စနီးယား - ဟာဇီဂိုဗီးနား - ဘော့ဆွာနာ - ဘိုလီးဗီးယား - ပေါ်တူဂီ - ဟွန်ဒူးရပ်စ် - မာရှယ်ကျွန်းစု - မာဒါဂက်စကာ - မာလာဝီ - မာလီ - မော်လတာ - မလေးရှား - မိုက်ခရိုနီးရှား - တောင်အာဖရိက - တောင်ဆူဒန် - မြန်မာ - မက္ကစီကို - Mauritius - Mauritania - မိုဇမ်ဘစ် - မိုနာကို - မော်လ်ဒိုက် - မော်လ်ဒိုဗာ - မော်ရိုကို - မွန်ဂိုလီးယား - မွန်တီနီဂရိုး - Jordan Hashimite - လာအို - လတ်ဗီးယား - လစ်သူယေးနီးယား - လစ်ဗျား - Liechtenstein - လိုက်ဘေးရီးယား - ရိုမေးနီးယား - လူဇင်ဘတ် - ရဝမ်ဒါ - လီဆိုသို - လက်ဘနွန် - ရုရှား
©မူပိုင်ခွင့် 2020 အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များ Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS